ပြ2018နာရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (Impulsivity and Compulsivity) ၏အခန်းကဏ္ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) တွင် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းက္ပပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်
မှတ်ချက်များ - ဤစာတမ်းသစ်တွင်ထိပ်တန်းသုတေသီများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာများကိုလေ့လာမှုရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားသောပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ကွဲပြားမှုရှိသင့်ပါသလားဟုမေးသည်။ အထောက်အထားများအရညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာများကို“ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းမမှန်ခြင်း” ထက်“ စွဲလမ်းခြင်း” အဖြစ်ပိုမိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုလည်းသူတို့ကအကြံပြုသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောပြproblemsနာများသည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကဲ့သို့သောအခြား“ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ” နှင့်မကိုက်ညီပါ ရောဂါ, pyromania နှင့် kleptomania ။
ဇွန်လ 2018, လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်
Impulse နှင့် compulsive စှဲအပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန်၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်နှင့်အတူဆက်နွယ် transdiagnostic features တွေဖြစ်ကြသည်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသုတေသန Impulse နှင့် compulsive hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်စပ်ပုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက် hypersexuality မှလေးစားမှုနဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ (က) Self-အစီရင်ခံ Impulse နှင့် compulsive စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ကြသည်နှင့် (ခ) ကိုတူညီနှင့်ဤ domains များအတွက် hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနားမှု။ ကြီးမားတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ် (SEM) အသုံးချဖို့ (N = 13,778 သင်တန်းသားများကို; အမျိုးသမီး = ၄,၁၅၁၊ ၃၀.၁%) ရလဒ်များအရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားပြimpနာအလျောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအားနည်းချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုမှာ impulsivity (β = .4,151, β = .30.1) နှင့် compulsivity (β = .28, β = .26) တို့ဖြစ်သည်။ Impulse သည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားတွင် compulsivity (β = .23, β = .14) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် hypersexuality နှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ဆက်ဆံရေး (β = .41, β = .42) ရှိခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်အနေနှင့် impulsivity နှင့် compulsivity တို့သည်အချို့ပညာရှင်များအဆိုတင်သွင်းသည့်အတိုင်းပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုများစွာအထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, impulsivity ပြproblemနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထက် hypersexuality အတွက်ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ have ရှိလိမ့်မယ်။ အနာဂတ်သုတေသနသည်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောနောက်ထပ်လူမှုရေးနှင့်အခြေအနေများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမို၍ အမည်မသိ၊ ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကိန်းဂဏန်းများသည်တစ်နေ့လျှင် 81 ည့်သည် ၈၁ သန်းခန့်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၈.၅ ဘီလီယံရှိသည် (Pornhub.com, 28.5) ။ အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်ပြaticနာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့သောကြည့်ရှုသူများအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်လာနိုင်သည် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူ ၃.၆% ခန့်ရှိသည်။ Bőthe et al ။ , 2018 Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55, 395-406 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2017.1291798[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ချို့ယွင်းချက်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များသို့ရောက်ရှိခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုအပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများ (Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015 Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်, မာတီနို, အက်စ်, ကွီနွန်၊ LJ, & Potenza, MN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172, 1260-1261 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2015.15060843[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Twohig, Crosby, & Cox, 2009 Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ လတ်တလောဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်များအရ (Bostwick & Bucci, 2008 Bostwick, JM, & Bucci, JA (2008) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲမှုကို naltrexone ဖြင့်ကုသသည်။ Mayo Clinic ဆေးခန်းတရားစွဲဆိုထား, 83, 226-230 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kraus, Meshberg-Cohen ကို et al ။ , 2015 Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်, မာတီနို, အက်စ်, ကွီနွန်၊ LJ, & Potenza, MN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172, 1260-1261 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2015.15060843[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါ), ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထကြွလွယ်သောနှင့် compulsive သဘောထားတွေပါဝင်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်ရမ္မက်ကိုထိန်းချုပ်အတွက်အခက်အခဲများ, လူတွေကျော်လွှားရန်အဘို့အခိုင်ခံ့အတားအဆီးကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလည်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း (hypersexuality တစ်ထင်ရှားတဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ စာပေများတွင်; Kafka, 2010 Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 377–400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Karila et al ။ , 2014 Karila, အယ်လ်, Wéry, အေ, Weinstein, အေ, Cottencin, O. , Petit, အေ, Reynaud, အမ်, & Billieux, ဂျေ (2014) ။ လိင်အစွဲသို့မဟုတ် hypersexual disorder - တူညီတဲ့ပြproblemနာအတွက်အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးလား။ စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း, 20, 4012-4020 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဗီရီနှင့်ဘီလီယေးစ် 2017 Wéry, အေ, & Billieux, ဂျေ (2017) ။ ပြmနာဆိုက်ဘာဆက်စ် - စိတ်ကူး၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64, 238-246 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2015.11.007[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) အများအပြားလေ့လာမှုများအတွက် hypersexuality နှင့်အတူလူထက်ပို 80% အလွန်အကျွံ / ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (Kafka, အစီရင်ခံတင်ပြကြပြီ 2010 Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 377–400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2012 ရိဒ်, RC, လက်သမား, BN, Hook, ဖြစ်မှု, Garo, အက်စ်, Manning, JC, Gilliland, R. ... Fong သည်, တီ (2012) ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 9, 2868-2877 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အဆိုပါတူညီနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality အကြားဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုတိုးတက်လာသောနားလည်မှုတိုးတက်လာသောကြားဝင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်။ Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးအလွန်အမင်းထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်း (American Psychiatric Association, အဖြစ် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသောကြောင့် 2013 American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် (5th ed ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ။[Crossref], [Google Scholar]; el-Guebaly, ရွှံ့, Zohar, Tavares, & Potenza, 2012; Leeman & Potenza, 2012 Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2017 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2017) ။ ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းခွဲခြား။ (11th ed ။ beta ကိုဗားရှင်း) ။ ရယူရန်ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017 မှ https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048 [Google Scholar]), မေးခွန်းများကိုဤအင်္ဂါရပ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအရာမှအတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်. ပျေါထှနျးပါပြီ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ခု Self-အစီရင်ခံ Impulse နှင့် compulsive ၏ transdiagnostic အစီအမံများနှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏တိကျသောပုံစံများ (ဆိုလိုသည်မှာပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် hypersexuality) အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ရန်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။
ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှ Related အဖြစ်အဆိုပြုထား obsessive-compulsive Spectrum မော်ဒယ်
နှစ်ခုကျော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု obsessive-compulsive spectrum ကိုမော်ဒယ် (Holland အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်, 1993 ဟော်လန်, အီး (1993) ။ obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စိတ်ရောဂါရာဇဝင်, 23, 255-358 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Hollander & Wong, 1995 Hollander, အီး, & Wong က, CM (1995) ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 56 (ပျော့ပျောင်း 4), 3-6 ။[PubMed], [Google Scholar]) ကွဲပြားခြားနားသောစှဲနေတဲ့စဉ်ဆက်သို့မဟုတ်ရောင်စဉ်အပေါ် juxtaposed နိုင်သောစိတ်ကူးနှင့်အတူ။ disorders အန္တရာယ်၏အထင်သေးသည့်ထကြွလွယ်သောအဆုံးအပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ပိုမိုမှန်းဆယင်း compulsive အဆုံး (American Psychiatric Association အပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဤလှိုင်းတလျှောက်အိပ်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်, 2013 American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် (5th ed ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ။[Crossref], [Google Scholar]; ဟော်လန် & Benzaquen, 1997 Hollander, အီး, & Benzaquen, SD က (1997) ။ အဆိုပါ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း, 9, 99-110 ။ Doi: 10.1080 / 09540269775628[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ Hollande နဲ့ Wong (များ၏ metatheory အဆိုအရ1995 Hollander, အီး, & Wong က, CM (1995) ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 56 (ပျော့ပျောင်း 4), 3-6 ။[PubMed], [Google Scholar]), လိင်-related compulsive သို့မဟုတ်စှဲသည့်ရောင်စဉ်တန်း၏ထကြွလွယ်သောအဆုံးပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ကြသည်။ ရုံဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာ, Mick နှင့် Holland (2006 Mick, TM, & Hollander, အီး (2006) ။ ထကြွလွယ်သော - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS spectrum, 11, 944-955 ။ Doi: 10.1017 / S1092852900015133[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ပြproblemနာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသော၊ သို့သျောလညျးဤမော်ဒယ်များအဓိကအားစဉ်ဆက်မပြတ်ရောင်စဉ်၏အစွန်းရောက်ကြီးစွန်းတစ်လျှောက်တွင်လဲလျောင်း၏ဤစဉ်ဆက်နှင့် compulsivity ထောက်ခံပင်ကိုယ်မူလအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းအတွက်အကြီးအကျယ်အဆိုပြုထားခဲ့ကြသည်။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုစစ်ဆေးသည့်အခါစိတ်မ ၀ င်စားနိုင်သည့်အပြင်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုလေ့လာတွေ့ရှိပြီးလောင်းကစားမမှန်မှုရှိသူများသည်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတိုင်းတာသည် (Leeman & Potenza, 2012 Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Potenza, 2007 Potenza, MN (2007) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ Revista ဘရာဇီးလ် De Psiquiatria, 29, 105-106 ။ Doi: 10.1590 / S1516-44462007000200004[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အကျိုးဆက်မေးခွန်းများကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ Impulse နှင့် compulsive အကြားမျက်မြင်လက်တွေ့ဆင်းသက်လာဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိ။
Lochner et al ။ ရဲ့ (2005) လေ့လာမှုအရ, hypersexual ရောဂါ obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်နှင့်အတူလူနာနှင့်အတူရှုပ်ထွေးလက်တွေ့အင်တာဗျူး၏အခြေခံပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် somatic ပြွတ်ထက်အကျိုးကို-ချို့တဲ့စပျစ်သီးပြွတ်ပိုင်ပေမည်။ သို့သော် ICD-11 (အများ၏ဒသမဗားရှင်း beta ကိုဗားရှင်း ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများcompulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါအပေါ်) အလုပ်အဖွဲ့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (hypersexual ရောဂါ) ကိုအတွက်အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ခွဲခြားအောက်မှာထည့်သွင်းသင့်ကြောင်းအကြံပြု ICD-11 (Grant က et al ။ , 2014 Grant က, je, Atmaca, အမ်, Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Matsunaga, အိပ်ချ်, Janardhan Reddy, YC, ... ဝုဒ်, DW (2014) ။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 13, 125-127 ။ Doi: 10.1002 / wps.20115[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kraus et al ။ , 2018 Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P. , ပထမဦးစွာကို MB, Stein, DJ သမား, Kaplan, က MS ... ရိဒ်, GM က (2018) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17, 109-110 ။ Doi: 10.1002 / wps.20499[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Stein et al ။ , 2016 Stein, DJ သမား, Kogan, CS, Atmaca, အမ်, Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Grant က, je ... ဗန် Den Heuvel, oa (2016) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါများ၏ခွဲခြား။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 190, 663-674 ။ Doi: 10.1016 / j.jad.2015.10.061[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2017 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2017) ။ ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းခွဲခြား။ (11th ed ။ beta ကိုဗားရှင်း) ။ ရယူရန်ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017 မှ https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048 [Google Scholar]) ၎င်း၏အယူအဆနှင့် symptomatology (ဥပမာ, ရေရှည်ဆိုးကျိုးများရှိနေသော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် Impulse ကိုခုခံတွန်းလှန်ထပ်ခါတလဲလဲပျက်ကွက်) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူသည်အပြုအမူဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အလားတူအာရုံကြောဆိုင်ရာဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိသောကြောင့်မဖြစ်မနေလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါ (Potenza, Gola, Voon, Kor, & Kraus) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ 2017 Potenza, MN, Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, SW (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု, 4, 663–664. doi:10.1016/S2215-0366(17)30316-4[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ထို့ကြောင့်လိင်-related မမှန်သို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် hypersexuality ကဲ့သို့) ပြဿနာများကိုထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် compulsive features တွေဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့အမူအကျင့်စွဲလမ်း (ဥပမာ Griffiths ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်ရှိမရှိဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိမပါသဘောတူညီမှုလက်ရှိလည်းမရှိ 2016 Griffiths က, MD (2016) ။ အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စှဲမွဲမှု, 111, 2107-2108 ။ Doi: 10.1111 / add.13315[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kraus, Voon & Potenza, 2016 Kraus, SW, Voon, V. , & Potenza, MN (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စှဲမွဲမှု, 111, 2097- 2106 ။ Doi: 10.1111 / add.13297[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Potenza et al ။ , 2017 Potenza, MN, Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, SW (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု, 4, 663–664. doi:10.1016/S2215-0366(17)30316-4[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ဤဖြစ်နိုင်ခြေအပြန်အလှန်သီးသန့်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသတိပြုနေစဉ်။ hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောအဖြစ်မျှကြိုတင်လေ့လာမှုများတစ်ပြိုင်နက် Impulse နှင့် compulsive လေ့လာကြပြီပေးထား, ဒီဧရိယာအတွက်အသိပညာကွာဟမှုသည်လက်ရှိတွင်လည်းမရှိ။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းခြင်းတို့ကိုအတူတကွစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည် (Wetterneck, Burgess, Short, Smith၊ 2012 Wetterneck, မှန် CT, Burgess, AJ, က Short, MB, Smith က AH, & Cervantes, ME (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း, 62, 3-18 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ သို့သော်ဤလေ့လာမှုမှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, ယေဘုယျ compulsive ဆန့်ကျင်အဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကြောင်းလေ့လာမှုရဲ့ရလဒ်တွေကိုအဆိုအရ Impulse-related features တွေ (အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာကြံ) အပြုသဘောကိုအားနည်းစွာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်း၏ Self-အစီရင်ခံအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ပြဿနာနှင့် nonproblematic အသုံးပြုသူများအစနမူနာခွဲဝေပြီးနောက်, Impulse သူတို့ရဲ့အဆင့်ကို ပတ်သက်. အုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive မှလေးစားမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်း၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြုသဘောနှင့်အတန်အသင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ထိုပြဿနာအုပ်စုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကဖော်ပြခဲ့သည်ကြောင့်ပြဿနာနှင့် nonproblematic အသုံးပြုသူအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိ၏ အဆိုပါ nonproblematic အုပ်စုတစ်စုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏အဆင့်မြင့် 1.5-ခေါက်။ ထိုကဲ့သို့သော hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအဖြစ်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, ဆက်စပ်သောအဖြစ်လာမယ့်အပိုင်းထဲမှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းဒီလေ့လာမှုကအနည်းငယ်လေ့လာမှုများကိုသီးခြားစီရှိခြင်းနှင့်အတူ, တဦးတည်းမော်ဒယ်အတွက် Impulse နှင့် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) compulsive နှစ်ဦးစလုံးအကဲဖြတ်သောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါသည်, Impulse သို့မဟုတ် compulsive လေ့လာ ။
Impulse, Hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု
Impulse သည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူမျိုးစုံ (အရက်သောက်သုံးမှု၊ 2007 မေ့ဆေး, MD, Selby, EA, & Joiner, TE (2007) ။ maladaptive အပြုအမူတွေအတွက်အရေးတကြီး၏အခန်းကဏ္.ကို။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 45, 3018- 3029 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2007.08.012[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Fischer၊ Anderson၊ Smith တို့၊ 2004 Fischer, အက်စ်၊ အန်ဒါဆင်၊ KG၊ & Smith, GT (2004) ။ အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း - ရိုသေခြင်းနှင့်သက်တမ်း၏အခန်းကဏ္။ ။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 18, 269–274. doi:10.1037/0893-164X.18.3.269[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Fischer & Smith က 2008 Fischer, အက်စ်, & စမစ်, GT ကို (2008) ။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းပြgambနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - အပြုအမူကိုစရိုက်များနှင့်လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 789-800 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.10.008[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; မဖြစ်မနေဝယ်ယူရန်, Billieux, Rochat, Rebetez, & Van Der Linden, 2008 Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, ရေဗက်ဇ, MML, & ဗန် Der Linden, အမ် (2008) ။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောရှုထောင့်အားလုံးသည် Self- အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ဝယ်ယူသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 1432-1442 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.12.011[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; အစာစားခြင်းရောဂါများ, Claes, Vandereycken & Vertommen, 2005 Claes, အယ်လ်, Vandereycken, ဒဗလျူ, & Vertommen, အိပ်ချ် (2005) ။ အစားအသောက်ရောဂါလူနာအတွက် Impulse-related စရိုက်များ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 39, 739-749 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2005.02.022[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Fischer et al ။ , 2004 Fischer, အက်စ်၊ အန်ဒါဆင်၊ KG၊ & Smith, GT (2004) ။ အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း - ရိုသေခြင်းနှင့်သက်တမ်း၏အခန်းကဏ္။ ။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 18, 269–274. doi:10.1037/0893-164X.18.3.269[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Fischer & Smith က 2008 Fischer, အက်စ်, & စမစ်, GT ကို (2008) ။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းပြgambနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - အပြုအမူကိုစရိုက်များနှင့်လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 789-800 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.10.008[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) နှင့်ပြproblemနာရှိသောတိကျသောပြbehနာရှိသောအွန်လိုင်းအပြုအမူများ (သို့မဟုတ်) အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ Burnay၊ Billieux, Blairy နှင့်Larøiတို့ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းစွဲလမ်းမှု၊ 2015 Burnay, ဂျေ, Billieux, ဂျေ, Blairy, အက်စ်, & Larøi, အက်ဖ် (2015) ။ မည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုလွှမ်းမိုးသနည်း။ တစ် ဦး Integrated မော်ဒယ်မှတဆင့်အထောက်အထား။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 43, 28-34 ။ Doi: 10.1016 / j.chb.2014.10.039[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ပြဿနာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်း, Billieux et al ။ , 2011 Billieux, ဂျေ, Chanal, ဂျေ, Khazaal, Y. , Rochat, အယ်လ်, ဂေး, P. , Zullino, D. , & ဗန် Der Linden, အမ် (2011) ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်များပြားစွာကစားသောအွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ playing ကစားခြင်းများတွင်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ - အထီးဆိုက်ဘာကဖေးကစားသမားနမူနာတွင်ပုံဥပမာ။ Psychopathology, 44, 165-171 ။ Doi: 10.1159 / 000322525[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Zsila et al ။ , 2017 Zsila, Á။ , Orosz, G. အ, Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Király, O. , Griffiths က, အမ်, & Demetrovics, Z. (2017) ။ တိုးမြှင့်အဖြစ်မှန်ဂိမ်းများကိုအခြေခံသည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့လေ့လာမှု - ပိုကီမွန်၏ဖြစ်ရပ်သည်ပိုကုန်းမွန်ဖျားနာစဉ်နှင့်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2017.06.024[Crossref], [Google Scholar]; Facebook သုံးစွဲမှုနှင့်ပြuseနာရှိသောစီးရီးကိုကြည့်ခြင်း Orosz, Vallerand, Bőthe, Tóth-Király, & Paskuj, 2016 Orosz, G. အ, Vallerand, RJ, Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, & Paskuj, ခ (2016) ။ မျက်နှာပြင်အခြေပြုအပြုအမူများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုများ - Impulsivity နှင့်ပြFacebookနာမရှိသော Facebook အသုံးပြုမှုနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 101, 167-176 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2016.05.368[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ Whiteside နှင့် Lynam (အဆိုအရ2001 Whiteside, SP, & Lynam, DR (2001) ။ အဆိုပါအချက်ငါးခုမော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse နားလည်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 30, 669–689. doi:10.1016/S0191-8869(00)00064-7[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), Impulse လေးရှုထောင့်ကနေတဆင့်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်: အာရုံခံစားမှုရှာကြံ (အန္တရာယ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများခံစားဖြစ်အံ့သောငှါအတှေ့အကွုံမှပွင့်လင်း), အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး (ထိုစိတ်သဘောထားဟာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ရေရှည်အကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုလျော့ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့), ဇွဲမရှိခြင်း (စိတ်အာရုံထွေပြားလှုံ့ဆော်မှုပစ္စုပ္ပန်လျှင်ပျင်းစရာနှင့်ပြီးသွားစီမံကိန်းများကိုသို့မဟုတ်တာဝန်များကိုနှင့်အတူဖြစ်အံ့သောငှါတာဝန်များကိုအာရုံစိုက်တည်းခိုအတူအခက်အခဲများ) နှင့် ပုခုံးတွမရှိခြင်း (ဖြစ်နိုင်အကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားမတိုင်မီသရုပ်ဆောင်) ။ ဒါကမူရင်းလေးရှုထောင် Impulse မော်ဒယ်အကြာတွင်အမည်ရတစ်ပဉ္စမအတိုင်းအတာနှင့်အတူပြည့်စုံခဲ့ အပြုသဘောအရေးတကြီး (Billieux et al ။ , 2012 Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, Ceschi, G. အ, Carr, အေ, Offerlin-Meyer, ဗြဲ, Defeldre, AC အ ... ဗန် Der Linden, အမ် (2012) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 53, 609-615 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2011.09.001[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Lynam, Smith, Whiteside & Cyders, 2006 Lynam, DR, Smith, GT, Whiteside, SP, & Cyders, MA (2006) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကို: ထကြွလွယ်သောအပြုအမူငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလမ်းကြောင်းအကဲဖြတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ။ Purdue တက္ကသိုလ် in: အနောက် Lafayette ။ [Google Scholar]) ။ positive အရေးတကြီးအထူးကြပ်မတ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကြုံနေရသည့်အခါကျယ်ကျယ်ဖွပြုမူဖို့စိတ်သဘောထားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Impulse သို့မဟုတ် hypersexuality နှင့် Impulse အကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်အများစုမှာသုတေသနဖြစ်စေတစ်ဦး unidimensional Impulse concept ကိုလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ရှာကြံအာရုံ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ။
လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနယ်ပယ်တွင်လိင်ကွဲ၊ လိင်ကွဲပြားမှု၊ လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားယခင်လေ့လာမှုများအရမိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသောစိတ်မ ၀ င်စားသောစိတ်များနှင့် hypersexuality တို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းသောဆက်စပ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်ကပိုမိုစိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ရှိသူများသည် hypersexual အပြုအမူများပိုမိုပြုလုပ်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် (Walton, Cantor & Lykins, 2017 ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, & Lykins, အေဒီ (2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ရို variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 721–733. doi:10.1007/s10508-015-0606-1[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ hypersexual အထီးများနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသိုင်းအဝိုင်းထိန်းချုပ်မှုများနမူနာကိုလေ့လာသည့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် impulsivity နှင့် hypersexuality ၏အဆင့်အကြား၊ စိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ အားနည်းချက်နှင့်သတိရှိမှုတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဆက်ရှိနေသည့်ဆက်ဆံရေးကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Reid, Bramen၊ Anderson၊ & Cohen, 2014 Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ လိင်မှုကိစ္စအလွန်တက်ကြွသောလိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်ဆိုင်ရာယောက်ျားလေးများ၏ဖြစ်ရပ်များတွင်အလားတူအပြုသဘောဆောင်သော၊ အသင့်အတင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြထားသည့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေမှုနှင့် hypersexuality (Pachankis, Rendina, Ventuneac, Grov, & Parsons,) အကြားတွေ့ရှိရသည်။ 2014 Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
hypersexual နှင့် nonhypersexual အထီး Impulse သူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုနှင့် ပတ်သက်. နှိုင်းယှဉ်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ, အဓိပ်ပာယျဆီသို့သာလမ်းကြောင်းသစ် Impulse (Mulhauser et al စပ်လျဉ်း၌တွေ့။ , 2014 Mulhauser, KR, Struthers, WM, Hook, JN, Pyykkonen, BA, Womack, SD, & MacDonald, M. (၂၀၁၄) ။ hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 21, 170-183 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.908333[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ အခြားလေ့လာမှုမှာ hypersexual လိင်တူချစ်သူယောက်ျားနဲ့ nonhypersexual လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေ (Miner et al အကြား Impulse နှိုင်းယှဉ်။ , 2016 မိုင်းလုပ်သား, MH, Romine, RS, Raymond, N. , Janssen, အီး, မက်ဒေါ်နယ်, အေ, & Coleman, အီး (2016) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 1323-1331 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.015[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), တစ်ဦးတည်းသာသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Hypersexual လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေ Non-hypersexual လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေနှိုင်းယှဉ် Impulse nonplanning ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းကိုပြတော်မူ၏။ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မော်တာ Impulse သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်အတွက်အုပ်စုနှစ်စုအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖျောပွတွေ့ရှိချက် hypersexuality ယေဘူယျ Impulse မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် hypersexual အထီး Impulse အဆင့်ဆင့်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးတသားတည်းအုပ်စုသည် (Miner et al မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2016 မိုင်းလုပ်သား, MH, Romine, RS, Raymond, N. , Janssen, အီး, မက်ဒေါ်နယ်, အေ, & Coleman, အီး (2016) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 1323-1331 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.015[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Mulhauser et al ။ , 2014 Mulhauser, KR, Struthers, WM, Hook, JN, Pyykkonen, BA, Womack, SD, & MacDonald, M. (၂၀၁၄) ။ hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 21, 170-183 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.908333[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ သို့သော်တွေ့ရှိချက် Pachankis et al (Impulse အရေးကြီး hypersexuality ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2014 Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2014 Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဝေါ်လ်တန် et al ။ , 2017 ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, & Lykins, အေဒီ (2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ရို variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 721–733. doi:10.1007/s10508-015-0606-1[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာဖွေခြင်းသည်အချိန်ကာလအထိလေ့လာခဲ့သည့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအကြိမ်ရေနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် (Beyens, Vandenbosch, & Eggermont, 2015 Beyens, ဗြဲ, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 35, 1045-1068 ။ Doi: 10.1177 / 0272431614548069[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ပတေရု & Valkenburg, 2010 ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - ရူပါရုံသည်ရူပဗေဒ၏အခန်းကဏ္ The ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 37, 375-399 ။ Doi: 10.1177 / 0093650210362464[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ လူတို့သညျအဘို့, အတွေ့အကြုံရှာလည်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (ပေါလုမှအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်တွေ့ရှိထားသည် 2009 ပေါလုက, ခ (2009) ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကိုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 344- 357 ။ Doi: 10.1080 / 00224490902754152[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ Cooper က, Delmonico နှင့် Burg ရဲ့ (2000) သုတေသနအဆိုအရကျဘာစှဲနှင့်အတူလိင်ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလူများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည် non-လိင် compulsive ပြုပါနှင့်အတန်အသင့်လိင် compulsive လူမျိုးထက် သာ. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် nonsexual အာရုံ-ရှာကြံချိန်ခွင်ပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်း။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်တစ်ခုတိုးလာငွေပမာဏကိုဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, အာရုံခံစားမှုရှာ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနှင့်အတူလူကိုပိုပြင်းထန်စွာညစ်ညမ်းသုံးနိုင်ပါသည်။ Impulse လေးကတခြားအဆိုပြုထားအတိုင်းအတာ (အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး, အပြုသဘောအရေးတကြီး, ဇွဲမရှိခြင်းနှင့်ပုခုံးတွမရှိခြင်း) နှင့်စပ်လျဉ်းမရှိယခင်သုတေသနအစဉ်အဆက်ကဤ variable တွေကိုနှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များလေ့လာခဲ့သည်။
ယေဘုယျ Impulse မှလေးစားမှုနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်း (ဆိုလိုသည်မှာ, တဦးတည်းရဲ့ဒေါသကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်အလွယ်တကူစိတ်ဆိုးလာပြီ) အဆိုးလူတို့တွင် Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ကိုတွေ့ထားပြီ, သို့သော်ဤမိန်းမတို့သည် (ကာရိုး et al များအတွက်အမှုမဟုတ်ပါ။ , 2008 ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ သီးခြားလေ့လာချက်တစ်ခုအရ (ထကြွလွယ်သောစိတ်အပါအ ၀ င်) မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းမှုနည်းခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းနှင့်လိင်နှင့်အသက်အရွယ်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာကွာခြားမှုကိုရှင်းပြသည် (Buzzell, Foss, & Middleton, 2006 Buzzell, တီ, Foss, D. , & Middleton, Z. (2006) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုရှင်းပြခြင်း - ချုပ်တည်းမှုသီအိုရီနှင့် deviance အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးနှင့်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုဂျာနယ်, 13, 96-116 ။ [Google Scholar]) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအပြုသဘောနှင့်အသင့်အတင့်အသုံးပြုခြင်း၏လှုံ့ဆော်မှုသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားလုံး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အားလုံးမှကင်းလွတ်စွာဆက်စပ်နေသည် (Reid, Li, Gilliland, Stein, & Fong) 2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အကျိုးဆက်အဲဒီဒေတာလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးလုံးဝကိုက်ညီပေါ်လာမညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Impulse အကြားအားနည်းပေမယ့်ရှုပ်ထွေးပြီးဆက်ဆံရေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပေါင်းလဒ်မှာပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထား Impulse ကိုအားနည်းစွာသို့မဟုတ်အတန်အသင့်ထိုကဲ့သို့သော (ဥပမာ Beyens et al ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှု၏ကြိမ်နှုန်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအများအပြားရှုထောင့်မှ related ကြောင်းပြသထားတယ်။ , 2015 Beyens, ဗြဲ, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 35, 1045-1068 ။ Doi: 10.1177 / 0272431614548069[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ကာရိုး et al ။ , 2008 ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ပတေရု & Valkenburg, 2010 ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - ရူပါရုံသည်ရူပဗေဒ၏အခန်းကဏ္ The ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 37, 375-399 ။ Doi: 10.1177 / 0093650210362464[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသုတေသန Impulse နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒေတာ Impulse သည်အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-related အစီအမံလည်းဆက်ဆံရေး (Miner et al ဖေါ်ပြခြင်းနှင့်အတူ, hypersexuality ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2016 မိုင်းလုပ်သား, MH, Romine, RS, Raymond, N. , Janssen, အီး, မက်ဒေါ်နယ်, အေ, & Coleman, အီး (2016) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 1323-1331 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.015[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Mulhauser et al ။ , 2014 Mulhauser, KR, Struthers, WM, Hook, JN, Pyykkonen, BA, Womack, SD, & MacDonald, M. (၂၀၁၄) ။ hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 21, 170-183 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.908333[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Pachankis et al ။ , 2014 Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2014 Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဝေါ်လ်တန် et al ။ , 2017 ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, & Lykins, အေဒီ (2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ရို variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 721–733. doi:10.1007/s10508-015-0606-1[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
compulsive, Hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု
Compulsivity သည်ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာနှင့်ဆက်နွယ်သောအခြားလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်အပြုအမူများ (ဥပမာ - ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ Leeman & Potenza) နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ 2012 Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; compulsive overeating Davis က & Carter က, 2009 Davis က, C တို့, & Carter က, JC (2009) ။ တစ် ဦး စွဲရောဂါအဖြစ် compulsive overeating ။ သီအိုရီနှင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ အလိုဆန္ဒ, 53, 1-8 ။ Doi: 10.1016 / j.appet.2009.05.018[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု, Modell, Glaser, Mountz, Schmaltz, & Cyr, 1992 Modell, JG၊ Glaser, FB, Mountz, JM, Schmaltz, S. , & Cyr, L. (1992) ။ အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု၏စွဲလမ်းမှုနှင့် compulsive ဝိသေသလက္ခဏာများ: အသစ်တီထွင်မေးခွန်းလွှာအားဖြင့်အရေအတွက်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, 16, 266–271. doi:10.1111/j.1530-0277.1992.tb01374.x[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; bulimia nervosa, အိန်ဂျယ် et al ။ , 2005 အိန်ဂျယ်, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Corneliussen, SJ, Wonderlich, SA, Crosby သည်, RD, က Le Grange, ဃ, Crow အဘိဓါန်, အက်စ်, ... မစ်ချယ်, je (2005) ။ bulimia nervosa အတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 38, 244-251 ။ Doi: 10.1002 / eat.20169[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ compulsive Fineberg et al (အနေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ "ထပ်တလဲလဲ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် function သပ္ပါယ် function ကိုမပါဘဲပေးခြင်းသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်အပြုအမူ impairing တစ်လေ့သို့မဟုတ်ကျပုံစံဖက်ရှင်အတွက်ဖျော်ဖြေ, ဖြစ်စေတင်းကျပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရသိရသည်သို့မဟုတ်ရိပ်မိအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်" ဖြစ်ပါတယ်။ , 2014 Fineberg, NA, Chamberlain, SR, Goudriaan, AE, Stein, DJ သမား, Vanderschuren, LJ, Gillan, CM ... Denis, ဃ (2014) ။ လူ့ neurocognition အတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: Impulse နှင့် compulsive ၏, လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ် Correlate ။ CNS spectrum, 19, 69-89 ။ Doi: 10.1017 / S1092852913000801[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar], p ။ 70) ။ ထို့ကြောင့်, compulsivity ရိုးရာဓလေ့, ထပ်တလဲလဲအပြုအမူများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုကာကွယ်တားဆီးသို့မဟုတ်လျှော့ချသို့မဟုတ်တစ် ဦး ချင်းစီရဲ့အပြုအမူ၏ကြောက်လန့်အကျိုးဆက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လုပ်ရပ်များအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရည်ညွှန်းလိမ့်မည် သို့သော်ဤသက်သာရာရမှုသည်ယာယီသာဖြစ်နိုင်ပြီးလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပုံမှန်ပါ ၀ င်နေသည့်သံသရာသို့ ဦး တည်သွားစေသည် (Deacon & Abramowitz, 2005 သင်းထောက်, BJ, & Abramowitz, JS (2005) ။ Yale-Brown ဘ ၀ င်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်စကေး - အချက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များ။ ပူပန် Disorders ၏ဂျာနယ်, 19, 573-585 ။ Doi: 10.1016 / j.janxdis.2004.04.009[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ compulsive နှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ nonparaphilic hypersexual ရောဂါ%0မှ 14% ကနေ compulsive-ပ္ပံ (Kafka, ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ obsessive-compulsive ရောဂါ-တစ်စိတ်ရောဂါရောဂါ၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့နှင့်အတူယောက်ျားများထဲတွင် 2015 Kafka, အမတ် (2015) ။ Non-paraphilic hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ psychopathology ။ လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ, 2, 202- 206 ။ Doi: 10.1007 / s40429-015-0060-0[Crossref], [Google Scholar]) ။ Obsessiveness - မလိုက်နာနိုင်သောအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည် (Minnesota Multiphasic Personality Inventory2(MMPI-2); Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, & Kaemmer, 1989 အသား, JN, Dahlstrom, WG, ဂရေဟမ်, JR, Tellegen, အေ, & Kaemmer, ခ (1989) ။ MMPI-2: အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အမှတ်ပေးများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ Minneapolis, MN: မင်နီဆိုတာစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။ [Google Scholar]) - ကုသမှုရှာသောအမျိုးသားများတွင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်သောအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြင့်မားသည်ဟုတွေ့ရှိရသော်လည်းဤခြားနားချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအားနည်းနေသည် (Reid & Carpenter, 2009 Reid, RC, & လက်သမား, BN (2009) ။ MMPI-2 ကို အသုံးပြု၍ hypersexual လူနာများအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ပညာ၏ဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 35, 294-310 ။ Doi: 10.1080 / 00926230902851298[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ DSM-IV အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်လက်တွေ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (SCID-II) (ပထမ၊ ဂစ်ဘွန်၊ စပိစ်၊ ဝီလျံ၊ ဘင်ဂျမင်) ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမှု - အနိုင်ကျင့်မှုအဆင့်အကြားဆက်စပ်မှုကိုသောအခါ၊ 1997 ပထမ ဦး စွာ MB, Gibbon, M. , Spitzer, RL, Williams, JBW, & Benjamin, LS (1997) ။ SCID-II ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှိပ်ပါ။ [Google Scholar]) -and hypersexuality ၏အဆင့်ကို hypersexual လိင်ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေအထီးအကြားဆန်းစစ်ခဲ့သည်, တစ် ဦး အပြုသဘောအားနည်းအသင်းအဖွဲ့ဆီသို့လမ်းကြောင်းသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် (Carpenter, Reid, Garos, & Najavits, 2013 လက်သမား, BN, Reid, RC, Garos, အက်စ်, & Najavits, LM (2013) ။ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေယောက်ျားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ comorbidity ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 20, 79-90 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.772873[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ အဆိုပါဖျောပွရလဒ်များကို၏အခြေခံတွင်, compulsive hypersexuality ဖို့အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ထုံးစံ၌အထောက်အကူပြုရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (အသေးစိတ်ဒီတော့ယေဘုယျ compulsive ထက်) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အထီးကျောင်းသားများကိုတွေထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြဿနာအမူအကျင့်ရလဒ်များ (Twohig et al အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ဖြန်ဖြေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတူအပြုသဘောနှင့်အတန်အသင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ , 2009 Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ obsessive-compulsive disorder (ဥပမာ၊ Abramowitz, Tolin, & Street,) တွင်တွေ့ရှိရသောအတွေးဖိနှိပ်မှု၏သက်ရောက်မှုများနှင့်အညီ၊ 2001 Abramowitz, JS, Tolin, DF, & Street, GP (2001) ။ အတွေးဖိနှိပ်မှု၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှု: ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 21, 683–703. doi:10.1016/S0272-7358(00)00057-X[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Tolin, Abramowitz, Przeworski, & Foa, 2002 Tolin, DF, Abramowitz, JS, Przeworski, A. , & Foa, EB (2002) ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်အတွေးဖိနှိပ်မှု။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 40, 1255–1274. doi:10.1016/S0005-7967(01)00095-X[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ဤရလဒ်များကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုရန်မလိုလားအပ်သောအလိုဆန္ဒများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုသြဇာညောင်းနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအတ္တဒိုင်စတုန်းကြည့်ရှုခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏စရိုက်နှင့်ယုံကြည်မှုများနှင့်ပinိပက္ခဖြစ်နေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း) သည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကြည့်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအကြားအပြုသဘောဆောင်သောအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းသီးခြားအဆင်ပြေသောနမူနာတွင်ဖော်ပြထားသည် (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle, 2015 Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125–136. doi:10.1007/s10508-013-0257-z[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အခြားလေ့လာမှုများအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အပြုသဘောနှင့်အတန်အသင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိရသည် (Kraus & Rosenberg, 2014 Kraus, SW, & Rosenberg, အိပ်ချ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမေးခွန်းများ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 451–462. doi:10.1007/s10508-013-0229-3[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ဤရလဒ်သည်, hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (ဥပမာ, Kafka ၏ဒြပ်စင်လည်းပါဝင်သည်သောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီများမှာ 2010 Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 377–400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အမျိုးသားများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အထွေထွေ compulsivity ကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းသောအသင်းအဖွဲ့များကိုပြသခဲ့သည် (Egan & Parmar, 2013 Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောပုံစံဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါယေဘုယျမဖြစ်မနေနှင့်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလိင်စွဲလမ်းမှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပြင်ယေဘုယျအားဖြင့်စွဲလမ်းမှု (Egan & Parmar, 2013 Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အတူတူယူ compulsive နှင့် hypersexuality နှင့် compulsive နှင့်ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့များ (လက်သမား et al အတော်လေးအားနည်းနေပေါ်လာ။ , 2013 လက်သမား, BN, Reid, RC, Garos, အက်စ်, & Najavits, LM (2013) ။ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေယောက်ျားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ comorbidity ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 20, 79-90 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.772873[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Egan & Parmar, 2013 Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
Hypersexuality မှလေးစားခြင်းနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Impulse နှင့် compulsive ဆန်းစစ်ပါ
ကြိုတင်အလုပ်အပေါ်အဆောက်အအုံ (Wetterneck et al ။ , 2012 Wetterneck, မှန် CT, Burgess, AJ, က Short, MB, Smith က AH, & Cervantes, ME (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း, 62, 3-18 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), တစ်နောက်ဆက်တွဲခြေလှမ်းယေဘုယျ compulsive နှင့် Impulse နှင့်မည်သို့ဆောက်လုပ်ရေး၏အသီးအသီးတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးမြား၏အမှု၌ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်၏တစ်ပြိုင်နက်စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက် hypersexuality နှင့်တစ်ဦးကြီးများ, nonclinical နမူနာအတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်အစီအမံကို အသုံးပြု. နှင့်အတူဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့ hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှ Impulse နှင့် compulsive ဆွေမျိုးဆနျးစစျဖို့ရှိကြ၏။ ဒါဟာ Impulse နှင့် compulsive တစ်ခုချင်းစီကိုအပြုသဘောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality နှင့်အတူပတျသကျ, ဤဆက်ဆံရေးအတော်လေးအားနည်းနေပေမယ့် hypersexuality များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မယ်လို့တွေးဆခဲ့သည်။
ယခုလေ့လာမှုသည်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ (IRB) ၏ခွင့်ပြုချက်အရဟယ်လ်စင်ကီကြေငြာချက်အရပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသိပေးသဘောတူညီချက်သင်တန်းသားများကိုအားလုံးထံမှရရှိသောခဲ့သည်။ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုဆန်းစစ်သည့်သုတေသနလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အကြီးဆုံးဟန်ဂေရီသတင်းဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတွင်ကြော်ငြာခဲ့သည့်အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူများကိုသာဖိတ်ကြားသည်။ ပါ ၀ င်သူများသည်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များ (ဥပမာ၊ လူများ၏လိင်မှုအလေ့အထများနှင့်အပြုအမူများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း) အကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့သည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ခြင်းတို့အတွက်စိတ်ချရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်တန်းသားများကိုအသိပေးသဘောတူညီချက်ဖတ်နှင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည်မိနစ် ၃၀ ခန့်ကြာသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လူပေါင်း ၂၄,၃၇၂ ယောက်ပါ ၀ င်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။ သို့သော်တက်ရောက်သူ ၇,၂၈၂ ဦး သည်ဤဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသောအကြေးများမပြီးမှီဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်ချက် ၄ ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်။ (၁) လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ (၂) လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းအတာကိုပြီးဆုံးခြင်း၊ (၃) compulsivity နှင့်သက်ဆိုင်သောစကေးကိုပြီးစီးခြင်းနှင့် (၄) အဆိုပါထကြွလွယ်သော -related စကေးပြီးပါက။ ပါဝင်သူ ၁၇,၀၉၀ တွင် ၁,၆၀၂ သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ကအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ကြည့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ 24,372 က hypersexuality -related စကေးဖြည့်စွက်ဘဲ, 7,282 ဟာ compulsivity-related စကေးဖြည့်စွက်မပေးခဲ့ပါဘူး, 1 ပု Impulse နှင့်ဆက်စပ်သောစကေးဖြည့်စွက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်တက်ရောက်သူ ၁၃,၇၇၈ ဦး သည်အထက်ဖော်ပြပါစံနှုန်းများကိုပြည့်မီခဲ့သည် (အမျိုးသမီး = ၄,၁၅၁၊ ၃၀.၁%; ကျား၊ မ = 2, 3%) နှင့်အသက်4မှ 17,090 နှစ်ကြား ()Mအသက်အရွယ် = 33.52, SDအသက်အရွယ် = 10.93) ။ နေထိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၇,၅၀၅ (၅၄.၅%) သည်မြို့တော်တွင်နေထိုင်ပြီး ၂,၁၃၃ (၁၅.၅%)၊ မြို့များတွင် ၂,၈၈၁ (၂၀.၉%) နှင့်ကျေးရွာများတွင် ၁,၂၅၉ (၉.၁%) တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ပညာရေးအဆင့်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၃၅၀ (၂.၅%) တွင်မူလတန်းအဆင့်ဒီဂရီသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကျောင်းသားများ၊ ၅၄၁ (၃.၉%) တွင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာဘွဲ့များ၊ ၄,၃၈၃ (၃၁.၈%) တွင်အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ၈,၅၀၄ (၆၁.၇%) တွင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဒီဂရီများရှိသည် (ဘွဲ့၊ မဟာဘွဲ့) , သို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့) ။ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ 7,505 သည်တစ်ကိုယ်ရေသမား (၂၃.၂%)၊ ၅,၉၃၂ ယောက်တို့သည်ဆက်ဆံရေးရှိကြသည် (၄၃.၁%)၊ ၅၅၆ ယောက် (၄.၀%)၊ ၃.၄၃၀ လက်ထပ်ခဲ့ကြသည် (၂၄.၉%)၊ ၃၈၄ ယောက် (၂.၈%)၊ မုဆိုးမများ (၀.၅%) နှင့် ၂၁၁ တို့သည်“ အခြား” ရွေးချယ်မှု (၁.၅%) ကိုပြသည်။ ပါဝင်သူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ယခင်ကထူထောင်ခဲ့သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးမြန်းခဲ့သည် (Tr Nen, Nilsen, & Stigum, 2006 Træen, ခ, Nilsen, TSR, & Stigum, အိပ်ချ် (2006) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရိုးရာမီဒီယာနှင့်နော်ဝေတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 43, 245-254 ။[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ဤမေးခွန်း၏အဖြေကို အခြေခံ၍ ၁၁၃၃၈၈ သည်လိင်ကွဲလိင်တူချစ်သူ (၈၂.၇%)၊ ၁,၄၀၁ ဦး သည်လိင်တူဆက်ဆံမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ (၁၀.၂%)၊ ၃၈၀ သည်လိင်ကွဲ (၂.၈%)၊ ၉၉ ဦး တို့သည်လိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့် ၀.၇% အထိလိင်တူဆက်ဆံသူများဖြစ်သည်။ ), 11,388 လိင်တူတိမ်းညွတ် (82.7%) ခဲ့ကြသည်, 1,401 asexual ခဲ့ကြသည် (10.2%), 380 သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ် (2.8%) နှင့်ပတ်သက်။ မသေချာခဲ့ကြနှင့် 99 က "အခြား" option ကို (0.7%) ညွှန်ပြ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်တန်းသားများသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအပတ်စဉ်ကြည့်ရှုပြီးတစ်မိနစ်လျှင် ၂၆.၄ မိနစ်သုံးစွဲကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (SD = 20.5) ။
UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး (UPPS-P)
UPPS-P Impulsive Behaviour အတို (Zsila, Bőthe, Demetrovics, Billieux, & Orosz) 2017 Zsila, Á။ , Bőthe, ခ, Demetrovics, Z. , Billieux, ဂျေ, & Orosz, G. အ (2017) ။ နောက်ထပ် SUPPS-P ထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံ - ကြီးမားသောဟန်ဂေရီနမူနာမှသက်သေသာဓက။ လက်ရှိစိတ်ပညာ, 1–11. doi:10.1007/s12144-017-9773-7[Crossref], [Google Scholar]) Billieux et al ကတီထွင်ခဲ့သည်။ (2012 Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, Ceschi, G. အ, Carr, အေ, Offerlin-Meyer, ဗြဲ, Defeldre, AC အ ... ဗန် Der Linden, အမ် (2012) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 53, 609-615 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2011.09.001[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) မူရင်း 59-ကို item UPPS-P (Lynam et al ကနေ။ , 2006 Lynam, DR, Smith, GT, Whiteside, SP, & Cyders, MA (2006) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကို: ထကြွလွယ်သောအပြုအမူငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလမ်းကြောင်းအကဲဖြတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ။ Purdue တက္ကသိုလ် in: အနောက် Lafayette ။ [Google Scholar]) ။ အဆိုပါက Short UPPS-P ကိုရှုထောင်နှုန်းလေးပစ္စည်းများနှင့်အတူငါးကွဲပြားခြားနားသော Impulse ရှုထောင့်ပါဝင်သော 20-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်: အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး (ဥပမာ, "ငါစိတ်ဆိုးဖြစ်ကြောင်းကိုသည့်အခါကျွန်မမကြာခဏစဉ်းစားတွေးခေါ်စရာမလိုဘဲပြုမူ"), အပြုသဘောအရေးတကြီး (ဥပမာ, "ငါတကယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလိုက်တဲ့အခါ စိတ်လှုပ်ရှားကျွန်မတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်ဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာလုပ်နေတာနဲ့တူ "ဥပမာ, (အာရုံကိုရှာ)" ငါ၏အလုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များကိုစဉ်းစားဖို့မလေ့ "), ပုခုံးတွမရှိခြင်း (ဥပမာ," ငါများသောအားဖြင့် "ဘာမှလုပ်နေတာမရောက်မီဂရုတစိုက်စဉ်းစား ), နှင့်ဇွဲမရှိခြင်း (ဥပမာ) "ငါယေဘုယျအားဖြင့်အဆုံး ဖြတ်. အမှုအရာကိုတွေ့မြင်လို" ။ ပစ္စည်းများအားလုံး = 1 ထံမှ (ကလေးမှတ် Likert စကေးအပေါ်သွင်းယူပေးခဲ့သည် ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ =4မှ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) ။ အဆိုပါရှုထောငျ့ကအနုတ်အရေးတကြီး, အပြုသဘောအရေးတကြီးနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာပြောင်းပြန်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့်စကေး၏ပြည်တွင်းရေးတသမတ်တည်းစားပွဲတင် 1 မှာပြနေကြသည်။
စားပွဲတင် 1 ။ Impulse, compulsive, Hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏ရှုထောင့်အကြားစာရင်းအင်း, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြရန်
CSV ဖိုင်display ဇယား
များအတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး DSM disorders
အဆိုပါ SCID-II ကို (ပထမ et al ။ , 1997 ပထမ ဦး စွာ MB, Gibbon, M. , Spitzer, RL, Williams, JBW, & Benjamin, LS (1997) ။ SCID-II ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှိပ်ပါ။ [Google Scholar]; Szádóczky, Unoka, & Rósa, 2004 Szádóczky, အီး, Unoka, Z. , & Rózsa, အက်စ် (2004) ။ DSM-IV ဝင်ရိုး II ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန် (SCID-II ကို) အတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး, ဟနျဂရေီဗားရှင်းအသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန်။ ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ: OS ကိုဟန်ဂေရီ Kft ။ [Google Scholar]) တွင်ပါဝင်သည် 140 ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ဖုံးအုပ် 10 ပစ္စည်းများပါဝင်သည် TheDiagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်, စတုတ္ထ Edition ကို (DSM-IV), ဝင်ရိုးတန်း II နှင့်ထပ်မံလေ့လာမှုများလိုအပ် diagnoses များအတွက်နောက်ဆက်တွဲအတွက်စာရင်းနှစ်ခုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်။ ပစ္စုပ္ပန်သုတေသနများတွင်သာ compulsive subscale (1) စစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောကိုး (0) ပစ္စည်းများကိုအသုံးချဖို့, compulsive အပြုအမူအကဲဖြတ်ထားပါသည်သောအသုံးပြုခဲ့သည် (ဥပမာ, "သူတို့နေရာလေးကိုတစ်နေ့နေ့မှာအတွက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်သည်အမှုရောက်သောအမှုအရာပစ် ချ. ရှိပါသလား") ။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့်စကေး၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုစားပွဲတင် 1 မှာပြနေကြသည်။
Hypersexual အပြုအမူ Inventory (HBI)
အဆိုပါ HBI (နှစ်ဦးစလုံး, Bartók et al ။ , 2018 Bőthe, ခ, Bartók, R. , Tóth-Király, ဗြဲ, ရိဒ်, RC, Griiths, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ လိင်ကွဲပြားမှု၊ ကျားမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု - ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တမ်းလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ Doi: 10.1007 / s10508-018-1201-z[Crossref], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) သုံးဖက်မြင်ကိုဖြတ်ပြီး hypersexual အပြုအမူများ၏အဆင့်ကိုအကဲဖြတ် 19 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါ ထိန်းချုပ်မှု အချက် (ရှစ်ပစ္စည်းများ; ဥပမာ, "ငါနောက်ပိုင်းမှာနောင်တရကြလိမ့်မည်ကိုသိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ") ထိုကဲ့သို့သောသူသို့မဟုတ်သူမ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြောင်းလဲတစ်ဦးချင်းရဲ့ပျက်ကွက်ကြိုးစားမှုအဖြစ်လိင်-related အပြုအမူတွေအတွက် Self-ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ဖြေရှင်း အချက် (ခုနစ်ခုပစ္စည်းများ; ဥပမာ, "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတစ်ခုခုပွုလုပျခွငျးငါ့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးသည်") ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ပျက်, ဝမ်းနည်းမှု, ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်ဘဝစိုးရိမ်ပူပန်အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါ အကျိုးဆက်များ အချက် (လေးပစ္စည်းများကို; ဥပမာ "ကျွန်မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အရေးကြီးသောတာဝန်များကိုပြီးမြောက်မှငါ့ကိုအာရုံ") ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောတာဝန်များကို, လေ့လာမှုများ, သို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်သွေးသားဆန္ဒရမ္မက်, အတှေးအများနှင့်အပြုအမူများရိပ်မိအကျိုးဆက်များ, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာစကေး Beaton, Bombardier, Guillemin နှင့် Ferraz (ဖွငျ့ဖျောပွထားသညျ့အဆိုပါ protocol ၏အခြေခံပေါ်မှာဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်2000 Beaton, DE, Bombardier, C, Guillemin, F. , & Ferraz, MB (2000) ။ Self- အစီရင်ခံစာအစီအမံများယဉ်ကျေးမှုကို Cross- လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ။ ကြောရိုး, 25, 3186-3191 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ပစ္စည်းများအားလုံး = 1 ထံမှ (ကငါးမှတ် Likert စကေးအပေါ်ရမှတ်တွေ ဘယ်တော့မှမ =5မှ မကြာခဏ) ။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့်စကေး၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုစားပွဲတင် 1 မှာပြနေကြသည်။
အဆိုပါ PPCS (နှစ်ဦးစလုံး, Tóth-Király et al ။ , 2018 Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55, 395-406 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2017.1291798[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]က) အဆိုပြုထားခြောက်အစိတ်အပိုင်းစှဲမော်ဒယ် (Griffiths ကအပေါ်အခြေခံသည် 2005 Griffiths က, အမ် (2005) ။ တစ်ဦး biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏တစ်ဦးက '' အစိတ်အပိုင်းများ '' မော်ဒယ်။ ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုဂျာနယ်, 10, 191-197 ။ Doi: 10.1080 / 14659890500114359[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ အဆိုပါ PPCS တစ်ခုချင်းစီကိုအချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူခြောက်လအချက်များ, ကိုသုံးပြီးပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ်ခု 18-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်။ သည်းခံနေခြင်း ယင်းလှုပ်ရှားမှု၏တိုးမြှင့်ပမာဏတူညီတဲ့ခံစားချက်-ပြုပြင်မွမ်းမံသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောအခါ (ဥပမာ "ငါကျေနပ်အားရမှုတို့အတွက် ပို. ပို. ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်") ဖမ်းယူ။ Salience (ဥပမာ, "ငါ porn ငါ့အသက်ကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ခံစားရတယ်") တစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအတွက်ညစ်ညမ်း၏ဆက်စပ်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ခံစားချက်ပြုပြင်မွမ်းမံ အသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်သတင်းပို့တစ်ခုဖြစ်စေနှိုးဆွသောသို့မဟုတ်လျှော့ပေါ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကို (ဥပမာ, "ငါ porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ငါ၏အတင်းမာမှုဖြန့်ချိ") သည်။ ပဋိပက္ခ ပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းတို့၏သိသိသာသာအခြားသူတွေအကြားလူ့ပဋိပက္ခများလည်းပါဝင်သည်, နှင့်လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ (ဥပမာ (ထိုလှုပ်ရှားမှုပြဿနာများထုတ်လုပ်ပေမယ့်အခက်အခဲလျော့နည်းစားသုံးသို့မဟုတ်ဖြတ်ရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ် သိ. ဥပမာ) intrapsychic ပဋိပက္ခများ, "ငါ porn ငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၌ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေသလိုခံစားရတယ်" ) ။ Relapse abstinence သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအပြီးတွင်အလျင်အမြန်ညစ်ညမ်းမှပြန်လာသောများအတွက်စိတ်သဘောထား (ဥပမာ, "ငါမအောင်မြင်ငါစောင့်ကြည့် porn ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားခဲ့") သည်။ နောက်ဆုံး, ဆုတ်ခွာ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုလျော့နည်းသွားသို့မဟုတ်စဲဖြစ်ပါတယ်အခါမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက်များကိုနှင့်ဖြစ်ပွားကြောင်းစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များကိုရည်ညွှန်းသည် (ဥပမာ, "တစ်ခုခုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မှငါ့ကိုတားဆီးသောအခါငါအလေးပေးဖြစ်လာခဲ့သည်") ။ ပစ္စည်းများအားလုံး =7ထံမှ (က 1-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ရမှတ်တွေ ဘယ်တော့မှမ =7မှ မကြာခဏ) ။ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားနှင့်စကေး၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုစားပွဲတင် 1 မှာပြနေကြသည်။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုအတွက် SPSS 21 နှင့် Mplus 7.3 (Muthén & Muthén, 1998 Muthén, LK, & Muthén, BO (1998-2012) ။ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန် (7th ed ။ ) ။ Los Angeles မြို့, CA: Muthén & Muthén။ [Google Scholar]-2015) အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Normal skewness နှင့် kurtosis ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရ Cronbach ရဲ့ alpha (Nunnally, သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် 1978 Nunnally, JC (1978) ။ Psychometric သီအိုရီ။ တွင် စိတ်ပညာ McGraw-Hill ကစီးရီး (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: McGraw-Hill က။ [Google Scholar]စဉ်ဆက်မပြတ်အကြေးခွံ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်) ။ အသုံးပြုသော dichotomous စကေး (ဆိုလိုသည်မှာ SCID-II ၏ compulsivity subscale) အတွက်အတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုကို Kuder-Richardson formula 20 (KR-20, Kuder & Richardson) နှင့်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ 1937 Kuder, GF, & Richardson, MW (1937) ။ စမ်းသပ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ခန့်မှန်းချက်၏သီအိုရီ။ Psychometrika, 2, 151-160 ။ Doi: 10.1007 / BF02288391[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ် (SEM) ကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်း၊ ပစ္စည်းများကိုအမျိုးအစားညွှန်းကိန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်သိသာထင်ရှားသည့်ကြမ်းပြင်သက်ရောက်မှုများ (kurtosis နှင့် skewness အပေါ် အခြေခံ၍) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် mean- နှင့်ကှဲလှဲ - ချိန်ညှိအနည်းဆုံးရင်ပြင်ခန့်မှန်း (WLSMV) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် (Finney & DiStefano, 2006 Finney, SJ, & DiStefano, C (2006) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အတွက် Non- ပုံမှန်နှင့်အမျိုးအစားဒေတာ။ GR Hancock & RD Mueller (Eds ။ ) တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: တစ်ဦးကစက္ကန့်သင်တန်း (စစ။ 269-314) ။ Charlotte, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား: ပြန်ကြားရေးခေတ်ထုတ်ဝေရေး။ [Google Scholar]) ။ အသုံးအများဆုံးကောင်းမြတ်ခြင်း-of-မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း (ဘရောင်း, 2015 ဘရောင်း, TA (2015) ။ အသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။ [Google Scholar]; Kline, 2011 Kline, RB (2011) ။ အခြေခံမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များ၏အလေ့အကျင့် (3rd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။ [Google Scholar]) (Bentler လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, 1990 Bentler, ညနေ (1990) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမော်ဒယ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 107, 238-246 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.107.2.238[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဘရောင်း, 2015 ဘရောင်း, TA (2015) ။ အသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။ [Google Scholar]; Browne & Cudeck, 1993 Browne, MV, & Cudeck, R. (1993) ။ မော်ဒယ်မထိုက်မတန်အကဲဖြတ်၏အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်းများ။ KA Bollen & JS Long (အက်ဒ်) တွင်၊ စမ်းသပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ (စစ။ 136-162) ။ Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။[Crossref], [Google Scholar]; ဟူ & Bentler, 1999 ဟူ, အယ်လ်, & Bentler, pm တွင် (1999) ။ covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 6, 1-55 ။ Doi: 10.1080 / 10705519909540118[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Schermelleh-Engel, Moosbrugger နှင့်Müller, 2003 Schermelleh-Engel, K. , Moosbrugger, H. , & Muller, H. (2003) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း: အရေးပါမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဖော်ပြရန်ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်သုတေသနအွန်လိုင်း၏နည်းလမ်းများ, 8, 23-74 ။ [Google Scholar]; Tabachnick & Fidell, 2001 Tabachnick, BG, & Fidell, LS (2001) multivariate စာရင်းဇယားအသုံးပြုခြင်း (4th ed ။ ) ။ ဘော်စတွန်, MA: Allyn နှင့် Bacon ။ [Google Scholar]) ကအဆိုပြုထားမော်ဒယ်များ၏လက်ခံအကဲဖြတ်ရန်။ အဆိုပါ Tucker-Lewis ကအညွှန်းကိန်း (TLI; ကောငျးကြိုးအတှကျ≥ .95, လက်ခံနိုင်ဖွယ်များအတွက်≥ .90); အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း (ကောငျးကြိုးအတှကျ≥ .95, လက်ခံနိုင်ဖွယ်များအတွက်≥ .90 CFI) ဆန်းစစ်လျက်, အမြစ်စတုရန်းအမှားဆိုလို တစ်ဦး 06% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (CI) နဲ့; (လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဘို့ကောငျးကြိုးအတှကျ≤ .08, ≤ 90 ။ RMSEA) အကြမ်းဖျင်း၏။
SCID-II compulsivity subscale နှင့် HBI ပစ္စည်းများအတွက်၊ ဤငုပ်လျှိုးနေသည့် variable များကိုပစ္စည်းများစွာ သုံး၍ အကဲဖြတ်သောအချက်ကြောင့်၊ parceling ချဉ်းကပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထုပ်များသည်စုစည်းထားသောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးလက်ရှိပုံစံတွင်အကဲဖြတ်နိုင်သောကိန်းရှင်များဖြစ်သည်။ ဤနည်းသည်သီအိုရီအရတူညီသောအတိုင်းအတာပမာဏ (ဥပမာ Bandalos & Finney) အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ 2001 Bandalos, DL, & Finney, SJ (2001) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အတွက်ပစ္စည်း parceling ကိစ္စများ။ GA Marcoulides & RE Schumacker (Eds ။ ) ၌, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်နည်းပညာများကို (စစ။ 269-296) ။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်: Lawrence Erlbaum ။ [Google Scholar]; Little, Cunningham, Shahar, & Widaman, 2002 Little, TD, Cunningham, WA, Shahar, G. အ, & Widaman, KF (2002) ။ ကှကျဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ချောထုပ်ခြင်း - မေးခွန်းကိုလေ့လာခြင်း၊ တန်ရာတန်ကြေးကိုချိန်ခြင်း။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 9, 151–173. doi:10.1207/S15328007SEM0902_1[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Orosz et al ။ , 2016 Orosz, G. အ, Vallerand, RJ, Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, & Paskuj, ခ (2016) ။ မျက်နှာပြင်အခြေပြုအပြုအမူများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုများ - Impulsivity နှင့်ပြFacebookနာမရှိသော Facebook အသုံးပြုမှုနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 101, 167-176 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2016.05.368[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), နှင့်က Non-ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြန့်ဝေဒေတာ (Bandalos, ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များ minimize နိုင်ပါတယ် 2002 Bandalos, DL (2002) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အတွက် Of-မထိုက်မတန်ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် parameter သည်ခန့်မှန်းဘက်လိုက်မှုအပေါ် ချ. သာကို item ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 9, 78–102. doi:10.1207/S15328007SEM0901_5[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Matsunaga, 2008 Matsunaga, အမ် (2008) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အတွက် ချ. သာ item: တစ်ဦးကမေးစရာရှိတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ, 2, 260-293 ။ Doi: 10.1080 / 19312450802458935[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ အဆိုပါ SCID-II ကို compulsive subscale ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ရော်ဂျာနှင့် Schmitt ရဲ့ (2004 ရော်ဂျာ, WM, & Schmitt, N. (2004) ။ multidimensional ဖွဲ့စည်းမှုသုံးပြီး Parameter ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်မထိုက်မတန်: လေးပင်ကိုယ်မူလကှကျ algorithms တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ Multivariate အပြုအမူသုတေသန, 39, 379- 412 ။ Doi: 10.1207 / S15327906MBR3903_1[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) စူးစမ်းရှာဖွေရေးအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ -based algorithm ကိုကှကျဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ HBI အဘို့, တစ် ဦး အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည် - ကိုယ်စားလှယ်ချဉ်းကပ်မှုအသုံးချခဲ့သည် (Little က, Rhemtulla, Gibson, & Schoemann, 2013 Little က, TD, Rhemtulla, အမ်, Gibson, K. , & Schoemann, လေး (2013) ။ အဘယ်ကြောင့်ပစ္စည်းနှင့်ကှကျအငြင်းပွားဖွယ်ရာနှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ, 18, 285-300 ။ Doi: 10.1037 / a0033266[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ subscale (အမည်ရ, ဖြေရှင်း, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များ) ပျမ်းမျှခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်သုံးခုညွှန်းကိန်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။
Impulse, compulsive, hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ရှုထောင့်အကြားဖော်ပြရန်အချက်အလက်များ, ယုံကြည်စိတ်ချရညွှန်းကိန်းများနှင့်ဆက်စပ်စားပွဲတင် 1 မှာပြနေကြသည်။ အဆိုပါဆက်စပ်မှုအရ, သာသေးငယ်တဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ဆက်စပ်မှုများအကြားခြားနားချက်များ, hypersexuality နှင့် Impulse ၏တိကျသောရှုထောင့်ရှိကြ၏။ ထို့ကြောင့်, ရိုးရှင်းများ၏ဘို့အလိုငှါ, Impulse ၏စုစုပေါင်းရမှတ်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
SEM အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Impulse, compulsive, hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များအဖြစ်ကောင်းစွာစုစုပေါင်းနမူနာနှင့်သီးခြားမော်ဒယ်များအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ စံချိန်စံညွှန်းမီခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူမော်ဒယ်များမှာပြနေကြသည် ပုံ 1.
ပုံ 1 ။ hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ Impulse နှင့် compulsive နောက်ခံ (Nစုစုပေါင်း = 13,778; Nယောက်ျား = 9,555; Nအမျိုးသမီး = 4,151) ။ ဘဲဥပုံအတွက်တင်ပြအားလုံး variable တွေကိုငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုဖြစ်ကြသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သား၏မျက်နှာကို ထောက်. သူတို့ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောညွှန်ပြချက် variable တွေကိုဒီကိန်းဂဏန်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ကြသည်မဟုတ်။ တဦးတည်းခေါင်းနှစ်လုံးမြှားစံချိန်စံညွှန်းမီဆုတ်ယုတ်အလေးကိုယ်စားပြုနှစ်ယောက်ခေါင်းမြှားဆက်စပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မြှားတို့ကိုရက်နေ့တွင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်များစုစုပေါင်းနမူနာများ၏လမ်းကြောင်းကိုကိန်း, ဒုတိယနံပါတ်များအထီးနမူနာများ၏လမ်းကြောင်းကိုကိန်းညွှန်ပြ, တတိယနံပါတ်များအမျိုးသမီးနမူနာများ၏လမ်းကြောင်းကိုကိန်းညွှန်ပြညွှန်ပြ။ အားလုံးလမ်းကြောင်းအဆင့်မှာသိသိသာသာရှိကြ၏ p <.01
စုစုပေါင်းနမူနာမော်ဒယ်မှာတော့မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း (CFI = .941, TLI = .937, RMSEA = .055 [90% CI = .054-.055]) လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်ပြpornနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောရှိသော်လည်းအားနည်းစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (β = .17, p <.01 နှင့်β = .19, p <.01, အသီးသီး) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြထားသောအချိုးအစားမှာ ၆.၆% ရှိသည်။ hypersexuality ၏အမှု၌, compulsivity လည်းအပြုသဘောပေမယ့်အားနည်းစွာ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (β = .6.6, p <.01) ။ သို့သော် Impulse သည် hypersexuality (β = .37, p <.01) ။ hypersexuality ၏ရှင်းပြချက်ကှဲလှဲ၏အချိုးအစား 18.1% ဖြစ်ခဲ့သည်။
အထီးနမူနာမော်ဒယ်, မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း (CFI = .929, TLI = .924, RMSEA = .059 [90% CI = .058 -059]) လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ impulsivity နှင့် compulsivity နှစ်ခုစလုံးသည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းစွာဆက်စပ်နေခဲ့သည် (β = .28, p <.01 နှင့်β = .23, p <.01, အသီးသီး) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြထားသောအချိုးအစားမှာ ၆.၆% ရှိသည်။ hypersexuality ၏အမှု၌, compulsivity လည်းအပြုသဘောပေမယ့်အားနည်းစွာ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (β = .13.2, p <.01) ။ သို့သော် Impulse သည် hypersexuality (β = .41, p <.01) ။ hypersexuality ၏ရှင်းပြချက်ကှဲလှဲ၏အချိုးအစား 21.7% ဖြစ်ခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးနမူနာမော်ဒယ်မှာတော့မထိုက်မတန်ညွှန်းကိန်း (CFI = .914, TLI = .908, RMSEA = .055 [90% CI = .054-.056]) လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည်ပြpornနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနှင့်အပြုသဘောရှိသော်လည်းအားနည်းစွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (β = .26, p <.01 နှင့်β = .14, p <.01, အသီးသီး) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုရှင်းပြထားသောအချိုးအစားမှာ ၆.၆% ရှိသည်။ hypersexuality ၏အမှု၌, compulsivity လည်းအပြုသဘောပေမယ့်အားနည်းစွာ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် (β = .9.1, p <.01) ။ သို့သော် Impulse သည် hypersexuality (β = .42, p <.01) ။ hypersexuality ၏ရှင်းပြချက်ကှဲလှဲ၏အချိုးအစား 21.0% ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပေါင်းလဒ်များတွင်အသီးသီးပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် Impulse နှင့် compulsive, အကြားအသင်းအဖွဲ့များအားနည်းခဲ့ကြသည်, Impulse နှင့် compulsive အားဖြင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲအဖြစ်အကြား, စုစုပေါင်းနမူနာများတွင် (6.6%% 13.2 မှ) အတော်လေးနိမ့်ခဲ့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ hypersexuality ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ Impulse hypersexuality စုစုပေါင်းနမူနာအဖြစ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြား Impulse နှင့် compulsive အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% တစ်ခုကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲရှိခြင်းနှင့်အတူ compulsive ထက် hypersexual အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မော်ဒယ်များချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်အဖြစ်ခွဲခြားမှုအဆိုပြုနှင့်အတူ, (ထိုကဲ့သို့သော hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကဲ့သို့) ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစဉ်းစားရန်နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိဆွေးနွေးငြင်းခုံ, obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်, ဒါမှမဟုတ်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (ဥပမာ Griffiths ကရှိ 2016 Griffiths က, MD (2016) ။ အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စှဲမွဲမှု, 111, 2107-2108 ။ Doi: 10.1111 / add.13315[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kraus et al ။ , 2016 Kraus, SW, Voon, V. , & Potenza, MN (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စှဲမွဲမှု, 111, 2097- 2106 ။ Doi: 10.1111 / add.13297[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Potenza et al ။ , 2017 Potenza, MN, Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, SW (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု, 4, 663–664. doi:10.1016/S2215-0366(17)30316-4[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးစှဲ်ပတ်သက်နေခဲ့ကြပေမယ့် Impulse နှင့် compulsive နှင့်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ transdiagnostic features တွေအကြားဆက်ဆံရေး (Fineberg et al ကဲ့သို့သောထည့်သွင်းစဉ်းစားအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ , 2014 Fineberg, NA, Chamberlain, SR, Goudriaan, AE, Stein, DJ သမား, Vanderschuren, LJ, Gillan, CM ... Denis, ဃ (2014) ။ လူ့ neurocognition အတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: Impulse နှင့် compulsive ၏, လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ် Correlate ။ CNS spectrum, 19, 69-89 ။ Doi: 10.1017 / S1092852913000801[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Leeman & Potenza, 2012 Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု Self-အစီရင်ခံ Impulse ၏အစီအမံ, compulsive, hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်နှင့်ဖော်ထုတ်နေဖြင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံစေတယ်။
compulsive သာကိုအားနည်းစွာ related နေစဉ်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာတွေ့ရှိချက် Impulse အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် compulsive ထက် hypersexuality ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြု, Impulse အတန်အသင့်နှင့်အပြုသဘော hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးလိင်အကြားပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာကိုအားနည်းစွာ related ။ တစ်ဦးစာရင်းအင်းရှုထောင့်ကနေ Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံးအပြုသဘောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခန့်မှန်းပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်သေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲ၏အချိုးအစားကိုပိုမိုအလေးပေးသည်အခြားအချက်များပေါ်တွင်တင်သင့်ကြောင်းအကြံပြု, 15% မရောက်နိုင်ဘူး သုတေသနနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်အတွက် (related ဥပမာ, လူမှုရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ hypersexuality မှအတန်အသင့် related Impulse များအတွက်အဆိုပြုအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (များ၏ခွဲခြားဘို့နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးရှာတွေ့ ICD-11; ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO, 2017 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2017) ။ ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းခွဲခြား။ (11th ed ။ beta ကိုဗားရှင်း) ။ ရယူရန်ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017 မှ https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048 [Google Scholar]) တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲအဖြစ်။ အခြားမမှန်စဉ်းစားခုနှစ်တွင်လက်ရှိချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန် (ဥပမာပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါ, pyromania နှင့် kleptomania) နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (ဥပမာ, လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းမမှန်) ကြောင့်အဆိုပြုထားမမှန်များ၏ဗဟိုဒြပ်စင်အဖြစ်အဆိုပြုခံရခြင်း, အဆုံးစွန်သောကဏ္ဍ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါများ၏ခွဲခြားပိုကောင်းထောက်ခံပုံပေါ်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုယေဘုယျအား hypersexuality ကှာခွားစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကဒေါသ features တွေနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်အတူအားနည်းချက်များနှင့်အတွေ့အကြုံပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲ့သို့သော, အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏တိကျသောပုံစံများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ Hypersexuality အတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏အခန်းက္ပနှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု
Impulse နှင့် compulsive ဥပမာ Billieux et al (စွဲလမ်းအလားအလာနှင့်အတူပြဿနာအပြုအမူတွေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အများဆုံးမကြာခဏဆန်းစစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-related အချက်များအကြားရှိပါတယ်။ , 2008 Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, ရေဗက်ဇ, MML, & ဗန် Der Linden, အမ် (2008) ။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောရှုထောင့်အားလုံးသည် Self- အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ဝယ်ယူသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 1432-1442 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.12.011[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဒေးဗစ်နှင့်ကာတာ၊ 2009 Davis က, C တို့, & Carter က, JC (2009) ။ တစ် ဦး စွဲရောဂါအဖြစ် compulsive overeating ။ သီအိုရီနှင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ အလိုဆန္ဒ, 53, 1-8 ။ Doi: 10.1016 / j.appet.2009.05.018[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Deckman & DeWall၊ 2011 Deckman, တီ, & DeWall, CN (2011) ။ အပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုရှင်းလင်းခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 51, 674-678 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2011.06.004[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; အိန်ဂျယ် et al ။ , 2005 အိန်ဂျယ်, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Corneliussen, SJ, Wonderlich, SA, Crosby သည်, RD, က Le Grange, ဃ, Crow အဘိဓါန်, အက်စ်, ... မစ်ချယ်, je (2005) ။ bulimia nervosa အတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 38, 244-251 ။ Doi: 10.1002 / eat.20169[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Leeman & Potenza, 2012 Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Mottram & Fleming က 2009 Mottram, AJ, & Fleming, MJ (2009) ။ ပြgroupနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့် Extraversion၊ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 12, 319-321 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2007.0170[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]) ။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျသုတေသန Impulse, compulsive နှင့် (ထိုကဲ့သို့သော hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကဲ့သို့) ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အသင်းအဖွဲ့များလေ့လာခဲ့သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီမှုရလဒ်များကိုအတော်လေးသေးငယ်တဲ့အလုပ်အစီရင်ခံစာများဒီသေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်က။ သို့သော်ဤတစျခုမှမပါကြိုတင်လေ့လာမှုအစဉ်အဆက်တစ်ပြိုင်နက် hypersexuality နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ Impulse နှင့် compulsive များ၏ဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတွန်းအား (ရိဒ် et al ။ , နှင့်စပ်လျဉ်း 2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), Impulse အပြုသဘောကြီးနှင့်အတန်အသင့်အားလုံးနီးပါးစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သော, သော်လည်း, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်လျော့နည်းတသမတ်တည်းပုံစံဥပမာ Beyens et al (အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့များထံမှအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့ရန်, ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ , 2015 Beyens, ဗြဲ, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 35, 1045-1068 ။ Doi: 10.1177 / 0272431614548069[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ကာရိုး et al ။ , 2008 ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ပတေရု & Valkenburg, 2011 ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2011) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ယင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်း - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်သူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမော်ကွန်း, 40, 1015-1025 ။ Doi: 10.1007 / s10508-010-9644-x[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှု (ဆိုလိုသည်မှာ Wetterneck et al ။ , 2012 Wetterneck, မှန် CT, Burgess, AJ, က Short, MB, Smith က AH, & Cervantes, ME (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း, 62, 3-18 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုခြင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များနှင့်ဆင်တူသည် variable များအကြားအပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းသောအသင်းအဖွဲ့များကိုလေ့လာတွေ့ရှိပြီးနမူနာကိုပြproblemနာနှင့်ပြproနာမရှိသောအသုံးပြုသူများအဖြစ်ခွဲဝေပြီးနောက် impulsivity အဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် impulsivity သည်ယခင်ကအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ (ဥပမာ Hollander & Wong, 1995 Hollander, အီး, & Wong က, CM (1995) ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 56 (ပျော့ပျောင်း 4), 3-6 ။[PubMed], [Google Scholar]; Mick & Hollander, 2006 Mick, TM, & Hollander, အီး (2006) ။ ထကြွလွယ်သော - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS spectrum, 11, 944-955 ။ Doi: 10.1017 / S1092852900015133[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
hypersexuality ၏အမှု၌, သုတေသန Pachankis et al (Impulse ကိုအားနည်းစွာသို့မဟုတ်အတန်အသင့် hypersexual အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ပြသနှင့်တိုကျတှနျးထားလိုက်ပါတယ်။ , 2014 Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2014 Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဝေါ်လ်တန် et al ။ , 2017 ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, & Lykins, အေဒီ (2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ရို variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 721–733. doi:10.1007/s10508-015-0606-1[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ သို့သော် hypersexual နှင့် nonhypersexual တစ်ဦးချင်းစီ၏နှိုင်းယှဉ် (Miner et al တသမတ်တည်းရလဒ်များကိုပြကြပြီမဟုတ်။ , 2016 မိုင်းလုပ်သား, MH, Romine, RS, Raymond, N. , Janssen, အီး, မက်ဒေါ်နယ်, အေ, & Coleman, အီး (2016) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 1323-1331 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.015[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Mulhauser et al ။ , 2014 Mulhauser, KR, Struthers, WM, Hook, JN, Pyykkonen, BA, Womack, SD, & MacDonald, M. (၂၀၁၄) ။ hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 21, 170-183 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.908333[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို Pachankis et al ၏တွေ့ရှိချက် corroborate ။ (2014 Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) နှင့်ရိဒ် et al ။ (2014 Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) Impulse နှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့များ Impulse hypersexuality ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖို့အရေးကြီးအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, အပြုသဘောနှင့်အလယ်အလတ်ဖြစ်သောကြောင့်။
အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အထွေထွေမဖြစ်မနေပြုခြင်းတို့ထက် ပိုမို၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်အခါ (ဥပမာ - Grubbs, Exline et al ။ , 2015 Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125–136. doi:10.1007/s10508-013-0257-z[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Twohig et al ။ , 2009 Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Wetterneck et al ။ , 2012 Wetterneck, မှန် CT, Burgess, AJ, က Short, MB, Smith က AH, & Cervantes, ME (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း, 62, 3-18 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), အသင်းအလယ်အလတ်နှင့်အပြုသဘောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာအဘို့အများအပြားဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာစကားစပ်-တိကျတဲ့ compulsive ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အခြေအနေတွင်-အခမဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, ယေဘုယျ) compulsive ထက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောခံရဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ဒုတိယအနေနှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့် hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive (ဥပမာ, Kafka, ပါဝင်နိုင်ပါသည် 2010 Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 377–400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ယေဘုယျ compulsivity သည်ပြstudyနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုရှေ့ပြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ယခုလေ့လာမှု၏ရလဒ်များနှင့်ဆင်တူလျှင်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းအားနည်းသောအသင်းအဖွဲ့များကိုလေ့လာခဲ့သည် (Egan & Parmar, 2013 Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ ယခင်ကယေဘုယျ compulsive သို့မဟုတ် obsessive ဥပမာလက်သမား et al (သာ hypersexuality ဖို့ကိုအားနည်းစွာဆက်စပ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ , 2013 လက်သမား, BN, Reid, RC, Garos, အက်စ်, & Najavits, LM (2013) ။ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေယောက်ျားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ comorbidity ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 20, 79-90 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.772873[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; ရိဒ်နှင့်လက်သမား, 2009 Reid, RC, & လက်သမား, BN (2009) ။ MMPI-2 ကို အသုံးပြု၍ hypersexual လူနာများအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ပညာ၏ဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 35, 294-310 ။ Doi: 10.1080 / 00926230902851298[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ (ကစာရင်းအင်းရှုထောင့်ကနေ) ယေဘုယျ compulsive သိသိသာသာ hypersexuality ခန့်မှန်းပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အရွယ်အစားအနိမ့်သောကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အလားတူဆက်ဆံရေးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Impulse ၏ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာငါးအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်မော်ဒယ် (Billieux et al ။ , 2012 Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, Ceschi, G. အ, Carr, အေ, Offerlin-Meyer, ဗြဲ, Defeldre, AC အ ... ဗန် Der Linden, အမ် (2012) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 53, 609-615 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2011.09.001[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Lynam et al ။ , 2006 Lynam, DR, Smith, GT, Whiteside, SP, & Cyders, MA (2006) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကို: ထကြွလွယ်သောအပြုအမူငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလမ်းကြောင်းအကဲဖြတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ။ Purdue တက္ကသိုလ် in: အနောက် Lafayette ။ [Google Scholar]) ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality စပ်လျဉ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ငါးရှုထောငျ့-အမည်ရ, အနုတ်လက္ခဏာအရေးတကြီး, အပြုသဘောအရေးတကြီး, ပုခုံးတွ, ဇွဲမရှိခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုမရှိခြင်း၏ရှုထောင့်အကြားတစ်ဦးတသမတ်တည်းကြားဆက်ဆံရေးပုံစံသရုပ်ပြ, hypersexuality မှအပြုသဘောပေမယ့်ကိုအားနည်းစွာပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောနှင့်အတန်အသင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှာ-ခဲ့ကြသည် Impulse နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality ။ ထို့ကြောင့်, Impulse ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality တစ်စာရင်းအင်းခန့်မှန်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Impulse အပြုသဘောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Impulse နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏အတိုင်းအတာမဟုတ်ဘဲအသေးခဲ့သည်။
Impulse, compulsive နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကြားအားနည်းအသင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားူးပ
hypersexuality အတန်အသင့်ကစာရင်းအင်း Impulse အားဖြင့်ခန့်မှန်းနေစဉ် Impulse နှင့် compulsive သာကိုအားနည်းစွာကစာရင်းအင်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဆင့်ဟောကိန်းထုတ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအချက်များရှင်းပြပေမည်။ ဒါဟာ Impulse နှင့် compulsive ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိပေမယ့်ဖြန်ဖြေ variable တွေကိုမှတဆင့်အားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Impulse ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ရိဒ် et al ။ (2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) Impulse ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအားလုံးလေးယောက်တွန်းအားနှင့်အတူအပြုသဘောအလယ်အလတ်အသင်းအဖွဲ့များခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ် Impulse နှင့်အတူအနည်းဆုံးကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သော်လည်းမိမိတို့၏လေးစိတ်ခွန်အားနိုးအချက်များကနေစိတ်ခံစားမှုရှောင်ရှားခြင်း, စိတ်လှုပ်ရှားမှုတတိယအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခြင်းဒုတိယအင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်လိင်အပျော်အပါးဖြစ်ခြင်းရှာကြံနှင့်အတူ Impulse နှင့်အတူအင်အားအကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးယူဆချက်ကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သော်လည်းထိုအရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးစိတ်ခံစားမှုရှောင်ရှားခြင်းလှုံ့ဆျောမှု, Impulse နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဖျန်ဖြေကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
ထိုမှတပါး, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုလည်း Impulse နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးအလားအလာဖျန်ဖြေအဖြစ်အစေခံစေနိုင်သည်။ လူတို့သညျအဘို့, Impulse ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းမှအပြုသဘောဆက်စပ်ဖြစ်တွေ့ရှိထားပြီး; အမျိုးသမီးများအတွက်ပါကကာရိုး et al (ဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့။ , 2008 ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ အမျိုးသားများအနေနှင့်စိတ်တက်ကြွမှုမြင့်မားလေ့ရှိသည် (ဥပမာ Chapple & Johnson၊ 2007 Chapple, CL, & ဂျွန်ဆင်, KA (2007) ။ Impulse အတွက်ကျားကွဲပြားမှု။ လူငယ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် Juvenile တရားမျှတရေး, 5, 221-234 ။ Doi: 10.1177 / 1541204007301286[Crossref], [Google Scholar]; ဖြတ်ကူးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကမ့်ဘဲလ် 2011 လက်ဝါးကပ်တိုင်, CP, ဖြတ်တောက်ခြင်း, LT, & ကမ့်ဘဲလ်, အေ (2011) ။ Impulse အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ် Meta-analysis သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 137, 97-130 ။[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Waldeck & Miller က 1997 Waldeck, TL, & Miller က LS (1997) ။ တရား ၀ င်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွင်ကျား၊ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်, 9, 269–275. doi:10.1016/S0899-3289(97)90021-3[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]), က Impulse ၏ဤမွငျ့မားသောအဆင့်တွင်အလှည့်အတွက်ဥပမာအမှတ်တံဆိပ် et al (ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါအရာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတစ်ခုတိုးလာအကြိမ်ရေ, ဦးတည်သွားစေခြင်းအလိုငှါတွေးဆနိုင်။ , 2011 ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ, & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 371-377 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2010.0222[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Grubbs, Exline et al ။ , 2015 Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125–136. doi:10.1007/s10508-013-0257-z[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Grubbs, Volk et al ။ , 2015 Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2013.842192[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Twohig et al ။ , 2009 Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]) ။ မိန်းမတို့အဘို့, Impulse ကာရိုး et al (ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းမှဆက်စပ်မဟုတ်ခဲ့။ , 2008 ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]); ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည်အယောင်ဆောင်။ ပြောင်ပြောင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကို ဦး တည်စေသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ကြိမ်နှုန်းကိုထင်ဟပ်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုယူဆနိုင်သော်လည်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ - Lewczuk, Szmyd, Skorko, & Gola,) 2017 Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6, 445-456 ။ Doi: 10.1556 / 2006.6.2017.063[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]) ။ Egan နှင့် Parmar ရဲ့ (ခုနှစ်တွင်2013 Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) လေ့လာမှု, compulsive နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့ပိုပြီးယေဘုယျအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်စွဲကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အလားတူအာမခံပုံစံ compulsive နှင့် hypersexuality အကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်. တွေးဆနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပင် Self- ထိရောက်မှုကိုလည်း impulsivity, compulsivity နှင့်ပြproblemနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဖြစ်နိုင်သမျှဆက်ဆံရေးဖျန်ဖြေလိမ့်မည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ - Kraus, Rosenberg, Martino, Nich, & Potenza, 2017; Kraus, Rosenberg, & Tompsett, 2015)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုလျှော့ချရာတွင်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုနှင့်သွေးဆောင်မှုဖြစ်စေနိုင်သောအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားရာ၌မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုကိုအရေးကြီးသောအချက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည် ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်တွန်းလှန်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းခံရသူများသည်သွေးဆောင်မှုအခြေအနေများကိုရှောင်ရှားရန်မိမိတို့၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောကြောင့်သူတို့၏တွန်းအားကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အပြန့်ပြန့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုနိမ့်ကျစေနိုင်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (ဥပမာပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality) စသည့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုနှင့်မနိုင်မနင်းပြုမှုအဆင့်များကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ပညာရှင်အတော်များများ (ဥပမာ၊ Conway, Kane, Ball, Poling နှင့် Rounsaville) တို့၏အဆိုအရ 2003 Conway, KP, Kane, RJ, Ball, SA, Poling, JC, & Rounsaville, BJ (2003) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ရွေးချယ်မှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလူနာအကြား polysubstance ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်, 71, 65–75. doi:10.1016/S0376-8716(03)00068-1[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Griffiths က, 2017 Griffiths က, MD (2017) ။ '' စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး '' ၏ဒဏ္ဍာရီ။ စွဲ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆေးပညာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျာနယ်, 3, 555610 ။ Doi: 10.19080 / GJARM.2017.03.555610[Crossref], [Google Scholar]; Kerr က 1996 Kerr က JS (1996) ။ စွဲလမ်းနှစျယောကျဒဏ္ဍာရီ: အဆိုပါစွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရွေးချယ်မှုကိစ္စကို။ လူ့ Psychopharmacology, 11, S9-S14 ။[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ဆာလာဗစ် 2016 Szalavitz, အမ် (2016) ။ အပြတ်အတောက်ဦးနှောက်: နားလည်မှုစွဲ၏တစ်ဦးကတော်လှန်ရေးသမားနည်းလမ်းသစ်။ နယူးယောက်, NY: စိန့်မာတင်ရဲ့နှိပ်ပါ။ [Google Scholar]), စရိုက်များမရှိတစ်ခုတည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုသို့မဟုတ် set ကိုပြဿနာအပြုအမူတွေသို့မဟုတ်စှဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသုံးခုအုတ်မြစ် (anonymity ကို, တတ်နိုင်နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း; Cooper က, 1998 Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 1, 187-193 ။ Doi: 10.1089 / cpb.1998.1.187[Crossref], [Google Scholar]) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့်အခြေအနေများကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး၎င်းသည်ပြproblemနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဤအုတ်မြစ်များကိုဂရုတစိုက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုသိသိသာသာအထောက်အကူပြုလိမ့်မည် ထို့အပြင်သီးခြားအထီးကျန်ခြင်း (ဥပမာ - ဘိုဇိုဂလန်၊ ဒေမရရ၊ 2013 Bozoglan, B. , Demirer, V. , & Sahin, I. (2013) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့်အထီးကျန်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ဘဝကျေနပ်မှု။ တူရကီတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားကဏ္Aစုံလေ့လာမှု။ စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်, 54 (4), 313-319 ။ Doi: 10.1111 / sjop.12049[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Ceyhan & Ceyhan, 2008 Ceyhan, AA ကို, & Ceyhan, အီး (2008) ။ အင်တာနက်ပြproblemနာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့်အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာမိမိကိုယ်မိမိထိရောက်မှုရှိသည်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 11, 699-701 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2007.0255[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]) သို့မဟုတ်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု (ဥပမာ, Grubbs, Volk, et al ။ , 2015 Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2013.842192[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Levin, Lillis, & Hayes, 2012 Levin, ME, Lillis, ဂျေ, & Hayes, SC (2012) ။ ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုကောလိပ်အထီးအကြားပြproblemနာဖြစ်သနည်း အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ကိုဆန်းစစ်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 19, 168-180 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2012.657150[တေလာနှင့် Francis Online], [Google Scholar]; Paul & Shim, 2008 ရှင်ပေါလု, ခ, & ရှိန်း, JW (2008) ။ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ။ လိင်ကျန်းမာရေး၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 20, 187-199 ။ Doi: 10.1080 / 19317610802240154[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; ရိဒ် et al ။ , 2011 Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်စွဲလမ်းအွန်လိုင်းအပြုအမူတွေများ၏အဆင့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများအဖြစ်အချက်များ, တတ်နိုင်နှင့်ညစ်ညမ်း၏အမည်ဝှက်အလှည့်အတွက်အရာအတွက် (ပြဿနာသို့မဟုတ် nonproblematic) အဲဒီတိကျတဲ့အခြေအနေများပေါ်ပေါက်ရေးမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဆီးတားခြင်းငှါညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသိသာစေခြင်းငှါလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု။
တစ် ဦး ချင်း၏ privacy ကိုလေးစားပြီးဖြေဆိုသူများ၏အပြုအမူများကိုတိုက်ရိုက်အကဲဖြတ်ရန်အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်နောက်ထပ်အစီအမံများလိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့် hypersexuality ၏အတိုင်းအတာသည်ယာယီတည်ငြိမ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုပြင်းထန်စွာ (သို့) ပိုမိုပြproblemနာရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်ယာယီအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအပြုအမူသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်တည်ငြိမ်မှု၏မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရန် longitudinal လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်ထားသည့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အနာဂတ်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများသည်လိင်စိတ်စိတ်ထားယုံကြည်မှုများ (B mindthe, Tóth-Király, Demetrovics) ကဲ့သို့သော hypersexuality နှင့်ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့်အခြေအနေဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ & Orosz, 2017 Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2017) ။ လိင်အတွေးအခေါ်၏ပျံ့နှံ့နေသောအခန်းကဏ္: - လိင်မှုကိစ္စအားပျော့ပျောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောယုံကြည်မှုများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပြsatisfactionနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 117, 15-22 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2017.05.030[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ဆုချို့တဲ့သောရောဂါလက္ခဏာများ (Comings & Blum, 2000 လာ, DE, & Blum, K. (2000) ။ Reward ချို့တဲ့သည့်ရောဂါ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရှုထောင့်များ။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို, 126, 325–341. doi:10.1016/S0079-6123(00)26022-6[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Lochner et al ။ , 2005 Lochner, C တို့, Hemmings, SM, Kinnear, CJ, Niehaus, DJ သမား, နဲလ်, DG, Corfield, VA သို့ ... Stein, DJ သမား (2005) ။ လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု: obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive spectrum ကိုမမှန်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 46, 14-19 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2004.07.020[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု (Grubbs, Volk, Exline, & Pargament, 2015 Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2013.842192[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]), သို့မဟုတ်အခြေခံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို (Tóth-Király, Morin, Bőthe, Orosz, & Rigó, 2018 Tóth-Király, ဗြဲ, Morin, AJ, Bőthe, B. , Orosz, G. အ, & Rigó, အေ (2018) ။ လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံမှု၏ multidimensionality စုံစမ်းစစ်ဆေး: ကိုယ်စားပြုမှုမော်ဒယ်တစ် ဦး က bifactor ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း: တစ်ဦးက Multidisciplinary ဂျာနယ်, 25, 267-286 ။ Doi: 10.1080 / 10705511.2017.1374867[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာလေ့လာခဲ့ရလဒ်များလိင်၏တိကျသောပြဿနာရှုထောင့် (ဆိုလိုသည်မှာပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် hypersexuality) ကိုသာစပ်ဆိုင်သောအကြောင်းစိတ်တွင်ထားရှိမည်ရပါမည်။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု nonproblematic ရှုထောင့်အကဲဖြတ်ရန်နိုငျသောအစီအမံဖွံ့ဖြိုးဆဲနောက်ထပ်သုတေသနအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုဒ်များကို-ထားတဲ့အမူအကျင့်ဒေတာ-နှင့်သိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းကပေးစေခြင်းငှါအကြားပိုမိုအားကောင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်စပ်ဆောင်ရွက်မှုများ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုပေးအကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ Self-အစီရင်ခံတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဒါပေမယ့်လည်းပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဆက်နွယ်နေသောလူမှုရေးနှင့်အခွအေနေအချက်များကိုသာအလေးပေးကြောင်းတားဆီးနှင့်ကြားဝင်အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတချို့ကန့်အသတ်မှတ်ချက်ပြုရပါမည်။ Self-အစီရင်ခံစာ Cross-Section နည်းလမ်းများအသုံးပြုခြင်းတွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိုကြောင်းတတ်နိုင်သမျှဘက်လိုက်မှုရှိသည်။ ထိုမှတပါး, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပစ္စုပ္ပန် Cross-Section တွေ့ရှိချက်ကနေပေါ်မူတည်ပြီးမရနိုင်ပါ။ အဆိုပါ SCID-II ကို၏ compulsive subscale ၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုလုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့, ထို့ကြောင့်ကြောင့်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏အနိမ့်အဆင့်တွေ့ရှိချက်ပုံပျက်ကြစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Self-အစီရင်ခံ compulsive SCID-II ကိုနည်းလမ်းများမှတဆင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Padua Inventory သို့မဟုတ်အခြားအကဲဖြတ်မှတဆင့် compulsive ၏အခြားအကဲဖြတ် (ဥပမာ, ။ Andrews က et al, 2011 Andrews က, MM, Meda, SA, သောမတ်စ်, အေဒီ, Potenza, MN, Krystal, JH, Worhunsky, P. ... Pearlson, GD (2011) ။ အရက်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုသမိုင်း Impulse အချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသ။ ဟားဗတ်, 69, 675-683 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2010.09.049[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Scherrer, Xian, Slutske, Eisen, & Potenza, 2015 Scherrer, JF, Xian, H. , Slutske, WS, Eisen, SA, & Potenza, MN (2015) ။ အထီးကျန် - compulsive အတန်းနှင့်အမျိုးသားအမွှာအမျိုးသားရေးဆောင်များတွင်အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအကြားဆက်နွယ်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 72, 342-349 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.2497[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]) ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကြပေမည်။ အလားတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ Impulse ၏ UPPS-P ကိုများနှင့်အခြား Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံဥပမာ Krishnan-Sarin et al (Construction ၏အမူအကျင့်အစီအမံတွေနဲ့ကွဲပြား။ , 2007 Krishnan-Sarin, အက်စ်, Reynolds က, ခ, Duhig, Am, စမစ်, အေ, Liss, တီ, McFetridge, အေ ... Potenza, MN (2007) ။ အမူအကျင့် Impulse ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်များအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်, 88, 79-82 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2006.09.006[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]အနာဂတ်လေ့လာမှုများပေးထားသောအပြုအမူများ၏ယူဆချက်ခန့်မှန်းရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူနှင့် Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံနှစ်ဦးစလုံးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်), က (ဥပမာ, [Fillmore အဆိုပါ cued သွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်သုံးပြီးအရေးကြီးပါတယ် 2003 Fillmore, MT (2003) ။ လက်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်တွေ့ရှိချက်: ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ အမူအကျင့်များနှင့်သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 2, 179-197 ။ Doi: 10.1177 / 1534582303257007[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]] ဒါမှမဟုတ်ရပ်တန့် signal ကိုတာဝန် [Logan, 1994 Logan, GD (1994) ။ အတွေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်အကြောင်း - stop signal ပါရာဒိုင်းအားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်။ D. Dagenbach & TH Carr (Eds ။ ) တွင် အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဘာသာစကားမှာ Inhibitory ဖြစ်စဉ်များ (စစ။ 189-239) ။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။ [Google Scholar]] တစ်ဦး Self-အစီရင်ခံအတိုင်းအတာနှင့်အတူ Impulse ၏အမှု၌ [Ding et al ။ , 2014 ding, WN, Sun က, JH, Sun က, YW, Chen က X တို့မှာ, Zhou, Y. , Zhuang, ZG ... ဒူ, YS (2014) ။ ရို Impulse နှင့် Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-Go ကို fMRI လေ့လာမှုအားဖြင့်ထင်ရှားအင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ချို့ယွင်း prefrontal ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တားစီး function ကို။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက် Functions များ, 10(1), 20. doi:10.1186/1744-9081-10-20[Crossref], [PubMed], [Google Scholar]]) ။ ဒါဟာအစ, ဥပမာ (တစ်ပြိုင်နက်တည်းအပြုအမူသူ့ဟာသူအကဲဖြတ်ရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့သောအခြားနယ်ပယ်များတွင်အမှုကိုပြုထားပြီးအဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအမှန်တကယ်ငွေပမာဏကိုညစ်ညမ်း web site ကိုအော်ပရေတာနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ခြေရာခံခြင်း-data ကိုချဉ်းကပ်အလုပ်သမား; Griffiths က, 2014 Griffiths က, MD (2014) ။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏လေ့လာမှုအတွက်အမူအကျင့်ခြေရာခံခြင်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုမှု။ SAGE သုတေသနနည်းလမ်းများမှုများ။ Doi: 10.4135 / 978144627305013517480[Crossref], [Google Scholar]).
ပေါင်းလဒ်များတွင်ယခင်ကစာပေအတွက်အဆိုပြုထားသောအဖြစ် Impulse နှင့် compulsive အဖြစ်အရေးကြီးများနှင့်တိုက်ရိုက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုမရခဲ့သလဲ, Impulse hypersexuality အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင်ဤရလဒ်များကိုအများအပြားအယူအဆရေးရာနှင့်သုတေသနသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပထမဦးစွာအများအပြားကိစ္စများပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. ပေါ်ထွန်း။ တဦးတည်းကိစ္စ Impulse နှင့် compulsive နှင့်အတူဆက်ဆံရေးဟာအရင်ကတွေးဆကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့မဟုတ်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု hypersexuality တစ် SUBCATEGORY ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်ပြဿနာ-ရာ၏ထီးအောက်မှာပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို (အထူးသဖြင့်ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) အကောင်းဆုံး, (Griffiths ကခွဲခြားစေခြင်းငှါဘယ်လို hypersexuality-ဖြစ်ပါတယ် 2016 Griffiths က, MD (2016) ။ အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စှဲမွဲမှု, 111, 2107-2108 ။ Doi: 10.1111 / add.13315[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Kraus et al ။ , 2016 Kraus, SW, Voon, V. , & Potenza, MN (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စှဲမွဲမှု, 111, 2097- 2106 ။ Doi: 10.1111 / add.13297[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]; Potenza et al ။ , 2017 Potenza, MN, Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, SW (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု, 4, 663–664. doi:10.1016/S2215-0366(17)30316-4[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®], [Google Scholar]).
သုတေသနရှုထောင့်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြလိုတဲ့သဘောထားကိုပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောအရင်းခံ, ထိုလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသုံးစွဲအကြိမ်ရေနှင့်အချိန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုသက်ဆိုင်သောစိတ်ပျက်, ပေးထားသောလှုပ်ရှားမှုများ၏ပျော့အကြောင်းကိုယုံကြည်ချက်, topic- အဖြစ် variable တွေကိုဖြန်ဖြေမှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာ Self-ထိရောက်မှုယုံကြည်ချက်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအချက်များ။ ဤအဖြစ်နိုင်ချေအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲခိုင်လုံ။ ထို့အပွငျကစှဲ၏ရှုပ်ထွေးသော etiologies စဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပိုများသောအထူးပြုလုပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များတစ်ရှုပ်ထွေးထားကြောင်းဖွယ်ရှိသည်အခြားတစ်ဦးချင်းခြားနားချက်အချက်များနှင့်လူမှုရေးနှင့်အခွအေနေအချက်များပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်နှင့်ထိုအပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးအစားအညီကွဲပြားစေခြင်းငှါဦးဆောင်လမ်းပြ။ အပိုဆောင်းသုတေသနတိကျတဲ့ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းရင်းများကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး, ကုသမှု, နှင့်မူဝါဒအစပျိုးထဲသို့အချက်များဘာသာပြန်ဆိုရန်လိုအပ်နေပါသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခကြေညာ။ ဒေါက်တာ Potenza ဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Rivermend ကျန်းမာရေး, Opiant / Lightlake ဟော်မုန်းများနှင့်ဂျက်ဇ်ဂီတဆေးဝါးအကြံပေးတော်မူပြီ အဆိုပါ Mohegan Sun ကကာစီနိုများနှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိ; ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအပေါ်ဥပဒေနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအဘို့နှင့်တိုင်ပင်။ , အခြားစာရေးဆရာများစီးပွားဖြစ်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမဘဏ္ဍာရေးဆက်ဆံရေးသတင်းပို့ပါ။
Abramowitz, JS, Tolin, DF, & Street, GP (2001) ။ အတွေးဖိနှိပ်မှု၏ဝိရောဓိသက်ရောက်မှု: ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 21, 683–703. doi:10.1016/S0272-7358(00)00057-X
[Crossref], [PubMed], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ် (5th ed ။ ) ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: စာရေးသူ။
Andrews က, MM, Meda, SA, သောမတ်စ်, အေဒီ, Potenza, MN, Krystal, JH, Worhunsky, P. ... Pearlson, GD (2011) ။ အရက်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုသမိုင်း Impulse အချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသ။ ဟားဗတ်, 69, 675-683 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2010.09.049
မေ့ဆေး, MD, Selby, EA, & Joiner, TE (2007) ။ maladaptive အပြုအမူတွေအတွက်အရေးတကြီး၏အခန်းကဏ္.ကို။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 45, 3018- 3029 ။ Doi: 10.1016 / j.brat.2007.08.012
Bandalos, DL (2002) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အတွက် Of-မထိုက်မတန်ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့် parameter သည်ခန့်မှန်းဘက်လိုက်မှုအပေါ် ချ. သာကို item ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 9, 78–102. doi:10.1207/S15328007SEM0901_5
[တေလာနှင့် Francis Online], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
Bandalos, DL, & Finney, SJ (2001) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အတွက်ပစ္စည်း parceling ကိစ္စများ။ GA Marcoulides & RE Schumacker (Eds ။ ) ၌, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်နည်းပညာများကို (စစ။ 269-296) ။ လန်ဒန်, ဗြိတိန်: Lawrence Erlbaum ။
Beaton, DE, Bombardier, C, Guillemin, F. , & Ferraz, MB (2000) ။ Self- အစီရင်ခံစာအစီအမံများယဉ်ကျေးမှုကို Cross- လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ။ ကြောရိုး, 25, 3186-3191 ။
Bentler, ညနေ (1990) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမော်ဒယ်များအတွက်နှိုင်းယှဉ်ထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 107, 238-246 ။ Doi: 10.1037 / 0033-2909.107.2.238
Beyens, ဗြဲ, Vandenbosch, အယ်လ်, & Eggermont, အက်စ် (2015) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တို့နှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 35, 1045-1068 ။ Doi: 10.1177 / 0272431614548069
[Crossref], [သိပ္ပံ၏ Web ကို®]
Billieux, ဂျေ, Chanal, ဂျေ, Khazaal, Y. , Rochat, အယ်လ်, ဂေး, P. , Zullino, D. , & ဗန် Der Linden, အမ် (2011) ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်များပြားစွာကစားသောအွန်လိုင်းအခန်းကဏ္ playing ကစားခြင်းများတွင်ပြproblemနာပါ ၀ င်မှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများ - အထီးဆိုက်ဘာကဖေးကစားသမားနမူနာတွင်ပုံဥပမာ။ Psychopathology, 44, 165-171 ။ Doi: 10.1159 / 000322525
Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, Ceschi, G. အ, Carr, အေ, Offerlin-Meyer, ဗြဲ, Defeldre, AC အ ... ဗန် Der Linden, အမ် (2012) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကိုထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏တိုတောင်းတဲ့ပြင်သစ်ဗားရှင်း validation ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 53, 609-615 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2011.09.001
Billieux, ဂျေ, Rochat, အယ်လ်, ရေဗက်ဇ, MML, & ဗန် Der Linden, အမ် (2008) ။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောရှုထောင့်အားလုံးသည် Self- အစီရင်ခံတင်ပြသည့်ဝယ်ယူသည့်အပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 1432-1442 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.12.011
Bostwick, JM, & Bucci, JA (2008) ။ အင်တာနက်လိင်စွဲမှုကို naltrexone ဖြင့်ကုသသည်။ Mayo Clinic ဆေးခန်းတရားစွဲဆိုထား, 83, 226-230 ။
Bőthe, ခ, Bartók, R. , Tóth-Király, ဗြဲ, ရိဒ်, RC, Griiths, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ လိင်ကွဲပြားမှု၊ ကျားမနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု - ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်တမ်းလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ Doi: 10.1007 / s10508-018-1201-z
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2017) ။ လိင်အတွေးအခေါ်၏ပျံ့နှံ့နေသောအခန်းကဏ္: - လိင်မှုကိစ္စအားပျော့ပျောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောယုံကြည်မှုများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုနှင့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပြsatisfactionနာဆိုင်ရာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 117, 15-22 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2017.05.030
Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Zsila, Á။ , Griffiths က, MD, Demetrovics, Z. , & Orosz, G. အ (2018) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးမှုပမာဏ (PPCS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 55, 395-406 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2017.1291798
Bozoglan, B. , Demirer, V. , & Sahin, I. (2013) ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့်အထီးကျန်မှု၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်ဘဝကျေနပ်မှု။ တူရကီတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများအကြားကဏ္Aစုံလေ့လာမှု။ စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်, 54 (4), 313-319 ။ Doi: 10.1111 / sjop.12049
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမ်, Laier, C တို့, Pawlikowski, အမ်, Schächtle, U. , Schöler, တီ, & Altstötter-Gleich, C. (2011) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - လိင်မှုနှိုးဆွမှုအဆင့်များနှင့်အင်တာနက်လိင်ဆိုဒ်များကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 14, 371-377 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2010.0222
ဘရောင်း, TA (2015) ။ အသုံးချသုတေသနလုပ်ငန်းများအတွက် confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။
Browne, MV, & Cudeck, R. (1993) ။ မော်ဒယ်မထိုက်မတန်အကဲဖြတ်၏အခြားနည်းလမ်းနည်းလမ်းများ။ KA Bollen & JS Long (အက်ဒ်) တွင်၊ စမ်းသပ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ (စစ။ 136-162) ။ Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။
Burnay, ဂျေ, Billieux, ဂျေ, Blairy, အက်စ်, & Larøi, အက်ဖ် (2015) ။ မည်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုလွှမ်းမိုးသနည်း။ တစ် ဦး Integrated မော်ဒယ်မှတဆင့်အထောက်အထား။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, 43, 28-34 ။ Doi: 10.1016 / j.chb.2014.10.039
အသား, JN, Dahlstrom, WG, ဂရေဟမ်, JR, Tellegen, အေ, & Kaemmer, ခ (1989) ။ MMPI-2: အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အမှတ်ပေးများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ Minneapolis, MN: မင်နီဆိုတာစာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်။
Buzzell, တီ, Foss, D. , & Middleton, Z. (2006) ။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုရှင်းပြခြင်း - ချုပ်တည်းမှုသီအိုရီနှင့် deviance အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတရေးနှင့်လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုဂျာနယ်, 13, 96-116 ။
လက်သမား, BN, Reid, RC, Garos, အက်စ်, & Najavits, LM (2013) ။ hypersexual ရောဂါနှင့်အတူကုသမှု - ရှာဖွေနေယောက်ျားအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ comorbidity ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 20, 79-90 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.772873
[တေလာနှင့် Francis Online]
ကာရိုးလ်၊ JS၊ Padilla-Walker, LM, Nelson, LJ, Olson, CD, Barry, CM, & Madsen, SD (2008) ။ ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်သူများအကြားမျိုးဆက် XXX အပြာစာပေရုပ်ပုံများလက်ခံသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သုတေသနဂျာနယ်, 23, 6-30 ။ Doi: 10.1177 / 0743558407306348
Ceyhan, AA ကို, & Ceyhan, အီး (2008) ။ အင်တာနက်ပြproblemနာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့်အထီးကျန်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာမိမိကိုယ်မိမိထိရောက်မှုရှိသည်။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 11, 699-701 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2007.0255
Chapple, CL, & ဂျွန်ဆင်, KA (2007) ။ Impulse အတွက်ကျားကွဲပြားမှု။ လူငယ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့် Juvenile တရားမျှတရေး, 5, 221-234 ။ Doi: 10.1177 / 1541204007301286
Claes, အယ်လ်, Vandereycken, ဒဗလျူ, & Vertommen, အိပ်ချ် (2005) ။ အစားအသောက်ရောဂါလူနာအတွက် Impulse-related စရိုက်များ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 39, 739-749 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2005.02.022
လာ, DE, & Blum, K. (2000) ။ Reward ချို့တဲ့သည့်ရောဂါ - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာရှုထောင့်များ။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို, 126, 325–341. doi:10.1016/S0079-6123(00)26022-6
Conway, KP, Kane, RJ, Ball, SA, Poling, JC, & Rounsaville, BJ (2003) ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ရွေးချယ်မှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလူနာအကြား polysubstance ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်, 71, 65–75. doi:10.1016/S0376-8716(03)00068-1
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 1, 187-193 ။ Doi: 10.1089 / cpb.1998.1.187
Cooper က, အေ, Delmonico, DL, & Burg, R. (2000) ။ Cybersex အသုံးပြုသူများ၊ အလွဲသုံးစားပြုသူများ၊ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 7, 5-29 ။ Doi: 10.1080 / 10720160008400205
လက်ဝါးကပ်တိုင်, CP, ဖြတ်တောက်ခြင်း, LT, & ကမ့်ဘဲလ်, အေ (2011) ။ Impulse အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ် Meta-analysis သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 137, 97-130 ။
Davis က, C တို့, & Carter က, JC (2009) ။ တစ် ဦး စွဲရောဂါအဖြစ် compulsive overeating ။ သီအိုရီနှင့်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ အလိုဆန္ဒ, 53, 1-8 ။ Doi: 10.1016 / j.appet.2009.05.018
သင်းထောက်, BJ, & Abramowitz, JS (2005) ။ Yale-Brown ဘ ၀ င်သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်စကေး - အချက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များ။ ပူပန် Disorders ၏ဂျာနယ်, 19, 573-585 ။ Doi: 10.1016 / j.janxdis.2004.04.009
Deckman, တီ, & DeWall, CN (2011) ။ အပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ - စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုရှင်းလင်းခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 51, 674-678 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2011.06.004
ding, WN, Sun က, JH, Sun က, YW, Chen က X တို့မှာ, Zhou, Y. , Zhuang, ZG ... ဒူ, YS (2014) ။ ရို Impulse နှင့် Go ကို / အဘယ်သူမျှမ-Go ကို fMRI လေ့လာမှုအားဖြင့်ထင်ရှားအင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင်ချို့ယွင်း prefrontal ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တားစီး function ကို။ အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက် Functions များ, 10(1), 20. doi:10.1186/1744-9081-10-20
Egan, V. , & Parmar, R. (2013) ။ ညစ်ပတ်သောအကျင့်လား အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 39, 394-409 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.710182
el-Guebaly, N. , ရွှံ့, တီ, Zohar, ဂျေ, Tavares, အိပ်ချ်, & Potenza, MN (2012) ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများ - ရောဂါလောင်းကစားခြင်းကိစ္စ။ စှဲမွဲမှု, 107, 1726-1734 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.2011.03546.x
အိန်ဂျယ်, စင်ကာပူဒေါ်လာ, Corneliussen, SJ, Wonderlich, SA, Crosby သည်, RD, က Le Grange, ဃ, Crow အဘိဓါန်, အက်စ်, ... မစ်ချယ်, je (2005) ။ bulimia nervosa အတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ စား Disorders အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 38, 244-251 ။ Doi: 10.1002 / eat.20169
Fillmore, MT (2003) ။ လက်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်တွေ့ရှိချက်: ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှုပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ အမူအကျင့်များနှင့်သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, 2, 179-197 ။ Doi: 10.1177 / 1534582303257007
Fineberg, NA, Chamberlain, SR, Goudriaan, AE, Stein, DJ သမား, Vanderschuren, LJ, Gillan, CM ... Denis, ဃ (2014) ။ လူ့ neurocognition အတွက်နယူးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု: Impulse နှင့် compulsive ၏, လက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဦးနှောက်ပုံရိပ် Correlate ။ CNS spectrum, 19, 69-89 ။ Doi: 10.1017 / S1092852913000801
Finney, SJ, & DiStefano, C (2006) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်အတွက် Non- ပုံမှန်နှင့်အမျိုးအစားဒေတာ။ GR Hancock & RD Mueller (Eds ။ ) တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်: တစ်ဦးကစက္ကန့်သင်တန်း (စစ။ 269-314) ။ Charlotte, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား: ပြန်ကြားရေးခေတ်ထုတ်ဝေရေး။
ပထမ ဦး စွာ MB, Gibbon, M. , Spitzer, RL, Williams, JBW, & Benjamin, LS (1997) ။ SCID-II ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမေးခွန်းလွှာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှိပ်ပါ။
Fischer, အက်စ်၊ အန်ဒါဆင်၊ KG၊ & Smith, GT (2004) ။ အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကရောက်ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း - ရိုသေခြင်းနှင့်သက်တမ်း၏အခန်းကဏ္။ ။ ကိုစှဲအပြုအမူ၏စိတ်ပညာ, 18, 269–274. doi:10.1037/0893-164X.18.3.269
Fischer, အက်စ်, & စမစ်, GT ကို (2008) ။ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊ သောက်ခြင်းပြgambနာနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း - အပြုအမူကိုစရိုက်များနှင့်လူမှုရေးသင်ယူမှုနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 44, 789-800 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2007.10.008
Grant က, je, Atmaca, အမ်, Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Matsunaga, အိပ်ချ်, Janardhan Reddy, YC, ... ဝုဒ်, DW (2014) ။ Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့် ICD11 ထဲမှာ "အပြုအမူစှဲ" ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 13, 125-127 ။ Doi: 10.1002 / wps.20115
Griffiths က, အမ် (2005) ။ တစ်ဦး biopsychosocial မူဘောင်အတွင်းစွဲ၏တစ်ဦးက '' အစိတ်အပိုင်းများ '' မော်ဒယ်။ ပစ္စည်းသုံးစွဲမှုဂျာနယ်, 10, 191-197 ။ Doi: 10.1080 / 14659890500114359
Griffiths က, MD (2014) ။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏လေ့လာမှုအတွက်အမူအကျင့်ခြေရာခံခြင်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုမှု။ SAGE သုတေသနနည်းလမ်းများမှုများ။ Doi: 10.4135 / 978144627305013517480
Griffiths က, MD (2016) ။ အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများ: တစ်အပြုအမူစွဲအဖြစ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ စှဲမွဲမှု, 111, 2107-2108 ။ Doi: 10.1111 / add.13315
Griffiths က, MD (2017) ။ '' စွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး '' ၏ဒဏ္ဍာရီ။ စွဲ & ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆေးပညာ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျာနယ်, 3, 555610 ။ Doi: 10.19080 / GJARM.2017.03.555610
Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 44, 125–136. doi:10.1007/s10508-013-0257-z
Grubbs, JB, Volk, F. , Exline, JJ, & Pargament, KI (2015) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - စွဲစွဲလမ်းမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်အတိုချုပ်အတိုင်းအတာကိုအတည်ပြုခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 41, 83-106 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2013.842192
ဟော်လန်, အီး (1993) ။ obsessive-compulsive spectrum ကိုမမှန်: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ စိတ်ရောဂါရာဇဝင်, 23, 255-358 ။
Hollander, အီး, & Benzaquen, SD က (1997) ။ အဆိုပါ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်း, 9, 99-110 ။ Doi: 10.1080 / 09540269775628
Hollander, အီး, & Wong က, CM (1995) ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်, 56 (ပျော့ပျောင်း 4), 3-6 ။
ဟူ, အယ်လ်, & Bentler, pm တွင် (1999) ။ covariance ဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်မထိုက်မတန်အညွှန်းကိန်းများအတွက် Cutoff စံ: အသစ်ကအခြားနည်းလမ်းနှိုင်းယှဉ်သမားရိုးကျစံ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 6, 1-55 ။ Doi: 10.1080 / 10705519909540118
Kafka, အမတ် (2010) ။ Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39, 377–400. doi:10.1007/s10508-009-9574-7
Kafka, အမတ် (2015) ။ Non-paraphilic hypersexual ရောဂါနှင့်အတူယောက်ျားအတွက် DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ psychopathology ။ လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ, 2, 202- 206 ။ Doi: 10.1007 / s40429-015-0060-0
Karila, အယ်လ်, Wéry, အေ, Weinstein, အေ, Cottencin, O. , Petit, အေ, Reynaud, အမ်, & Billieux, ဂျေ (2014) ။ လိင်အစွဲသို့မဟုတ် hypersexual disorder - တူညီတဲ့ပြproblemနာအတွက်အသုံးအနှုန်းအမျိုးမျိုးလား။ စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်။ လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း, 20, 4012-4020 ။
Kerr က JS (1996) ။ စွဲလမ်းနှစျယောကျဒဏ္ဍာရီ: အဆိုပါစွဲလမ်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရွေးချယ်မှုကိစ္စကို။ လူ့ Psychopharmacology, 11, S9-S14 ။
Kline, RB (2011) ။ အခြေခံမူများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လ်များ၏အလေ့အကျင့် (3rd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: Guilford နှိပ်ပါ။
Kraus, SW, Krueger, RB, Briken, P. , ပထမဦးစွာကို MB, Stein, DJ သမား, Kaplan, က MS ... ရိဒ်, GM က (2018) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 17, 109-110 ။ Doi: 10.1002 / wps.20499
Kraus, SW, Meshberg-Cohen, အက်စ်, မာတီနို, အက်စ်, ကွီနွန်၊ LJ, & Potenza, MN (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172, 1260-1261 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2015.15060843
Kraus, SW, & Rosenberg, အိပ်ချ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမေးခွန်းများ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 451–462. doi:10.1007/s10508-013-0229-3
Kraus, SW, Rosenberg, အိပ်ချ်, Martino, အက်စ်, Nich, C. , & Potenza, MN (2017) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားရန်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုအတိုင်းအတာကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်ကန ဦး အကဲဖြတ်ခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6, 354-363 ။ Doi: 10.1556 / 2006.6.2017.057
Kraus, SW, Rosenberg, အိပ်ချ်, & Tompsett, CJ (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - လျှော့ချရေးနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုရန်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုရှိကြောင်းအကဲဖြတ်ခြင်း။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 40, 115-118 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.09.012
Kraus, SW, Voon, V. , & Potenza, MN (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စှဲမွဲမှု, 111, 2097- 2106 ။ Doi: 10.1111 / add.13297
Krishnan-Sarin, အက်စ်, Reynolds က, ခ, Duhig, Am, စမစ်, အေ, Liss, တီ, McFetridge, အေ ... Potenza, MN (2007) ။ အမူအကျင့် Impulse ဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်များအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ချုပ်ရာအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်, 88, 79-82 ။ Doi: 10.1016 / j.drugalcdep.2006.09.006
Kuder, GF, & Richardson, MW (1937) ။ စမ်းသပ်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏ခန့်မှန်းချက်၏သီအိုရီ။ Psychometrika, 2, 151-160 ။ Doi: 10.1007 / BF02288391
Leeman, RF, & Potenza, MN (၂၀၁၂) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါများအကြားတူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsivity အပေါ်တစ် ဦး ကအာရုံစူးစိုက်။ Psychopharmacology, 219, 469–490. doi:10.1007/s00213-011-2550-7
Levin, ME, Lillis, ဂျေ, & Hayes, SC (2012) ။ ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုကောလိပ်အထီးအကြားပြproblemနာဖြစ်သနည်း အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏အလယ်အလတ်အခန်းကဏ္ကိုဆန်းစစ်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 19, 168-180 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2012.657150
Lewczuk, K. , Szmyd, ဂျေ, Skorko, အမ်, & Gola, အမ် (2017) ။ အမျိုးသမီးများအကြားပြpornနာအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန်ရှာဖွေခြင်း။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်, 6, 445-456 ။ Doi: 10.1556 / 2006.6.2017.063
Little, TD, Cunningham, WA, Shahar, G. အ, & Widaman, KF (2002) ။ ကှကျဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်ချောထုပ်ခြင်း - မေးခွန်းကိုလေ့လာခြင်း၊ တန်ရာတန်ကြေးကိုချိန်ခြင်း။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း, 9, 151–173. doi:10.1207/S15328007SEM0902_1
Little က, TD, Rhemtulla, အမ်, Gibson, K. , & Schoemann, လေး (2013) ။ အဘယ်ကြောင့်ပစ္စည်းနှင့်ကှကျအငြင်းပွားဖွယ်ရာနှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်းများမလိုအပ်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ, 18, 285-300 ။ Doi: 10.1037 / a0033266
Lochner, C တို့, Hemmings, SM, Kinnear, CJ, Niehaus, DJ သမား, နဲလ်, DG, Corfield, VA သို့ ... Stein, DJ သမား (2005) ။ လက်တွေ့နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု: obsessive-compulsive ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive spectrum ကိုမမှန်၏စပျစ်သီးပြွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 46, 14-19 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2004.07.020
Logan, GD (1994) ။ အတွေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည့်စွမ်းရည်အကြောင်း - stop signal ပါရာဒိုင်းအားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်။ D. Dagenbach & TH Carr (Eds ။ ) တွင် အာရုံစူးစိုက်မှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဘာသာစကားမှာ Inhibitory ဖြစ်စဉ်များ (စစ။ 189-239) ။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
Lynam, DR, Smith, GT, Whiteside, SP, & Cyders, MA (2006) ။ အဆိုပါ UPPS-P ကို: ထကြွလွယ်သောအပြုအမူငါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလမ်းကြောင်းအကဲဖြတ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ။ Purdue တက္ကသိုလ် in: အနောက် Lafayette ။
Matsunaga, အမ် (2008) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်အတွက် ချ. သာ item: တစ်ဦးကမေးစရာရှိတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ, 2, 260-293 ။ Doi: 10.1080 / 19312450802458935
Mick, TM, & Hollander, အီး (2006) ။ ထကြွလွယ်သော - compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS spectrum, 11, 944-955 ။ Doi: 10.1017 / S1092852900015133
မိုင်းလုပ်သား, MH, Romine, RS, Raymond, N. , Janssen, အီး, မက်ဒေါ်နယ်, အေ, & Coleman, အီး (2016) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းကိုဖော်ထုတ်သည့်အမူအကျင့်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာယန္တရားများကိုနားလည်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 13, 1323-1331 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.06.015
Modell, JG၊ Glaser, FB, Mountz, JM, Schmaltz, S. , & Cyr, L. (1992) ။ အရက်သေစာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုမှု၏စွဲလမ်းမှုနှင့် compulsive ဝိသေသလက္ခဏာများ: အသစ်တီထွင်မေးခွန်းလွှာအားဖြင့်အရေအတွက်။ အရက်: လက်တွေ့နှင့်စမ်းသပ်သုတေသန, 16, 266–271. doi:10.1111/j.1530-0277.1992.tb01374.x
Mottram, AJ, & Fleming, MJ (2009) ။ ပြgroupနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အနေဖြင့် Extraversion၊ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ, 12, 319-321 ။ Doi: 10.1089 / cpb.2007.0170
Mulhauser, KR, Struthers, WM, Hook, JN, Pyykkonen, BA, Womack, SD, & MacDonald, M. (၂၀၁၄) ။ hypersexual ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 21, 170-183 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2014.908333
Muthén, LK, & Muthén, BO (1998-2012) ။ Mplus အသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန် (7th ed ။ ) ။ Los Angeles မြို့, CA: Muthén & Muthén။
Nunnally, JC (1978) ။ Psychometric သီအိုရီ။ တွင် စိတ်ပညာ McGraw-Hill ကစီးရီး (2nd ed ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: McGraw-Hill က။
Orosz, G. အ, Vallerand, RJ, Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, & Paskuj, ခ (2016) ။ မျက်နှာပြင်အခြေပြုအပြုအမူများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုများ - Impulsivity နှင့်ပြFacebookနာမရှိသော Facebook အသုံးပြုမှုနှင့်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများကြည့်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 101, 167-176 ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2016.05.368
Pachankis, je, Rendina, HJ, Ventuneac, အေ, Grov, C, & Parsons, JT (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလိင်တူချစ်သူနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများအကြား hypersexuality အတွက် maladaptive သိမှတ်ခံစားမှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 43, 669–683. doi:10.1007/s10508-014-0261-y
ပေါလုက, ခ (2009) ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက် variable တွေကိုများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 46, 344- 357 ။ Doi: 10.1080 / 00224490902754152
ရှင်ပေါလု, ခ, & ရှိန်း, JW (2008) ။ လိင်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများ။ လိင်ကျန်းမာရေး၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 20, 187-199 ။ Doi: 10.1080 / 19317610802240154
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2010) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - ရူပါရုံသည်ရူပဗေဒ၏အခန်းကဏ္ The ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန, 37, 375-399 ။ Doi: 10.1177 / 0093650210362464
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2011) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ယင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံများကိုအသုံးပြုခြင်း - မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အရွယ်ရောက်သူများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမော်ကွန်း, 40, 1015-1025 ။ Doi: 10.1007 / s10508-010-9644-x
Pornhub ရဲ့။ ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် 2017 တစ်နှစ်တာ (2018 ဇန်နဝါရီလ 9) ။ ရယူရန်ဇန်နဝါရီလ 12, 2018 မှ https://www.pornhub.com/insights/2017-year-in-review
Potenza, MN (2007) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအတွက် Impulse နှင့် compulsive ။ Revista ဘရာဇီးလ် De Psiquiatria, 29, 105-106 ။ Doi: 10.1590 / S1516-44462007000200004
Potenza, MN, Gola, အမ်, Voon, V. , Kor, အေ, & Kraus, SW (2017) ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုစွဲရောဂါလား? The Lancet စိတ်ရောဂါကုသမှု, 4, 663–664. doi:10.1016/S2215-0366(17)30316-4
Reid, RC, Bramen, JE, Anderson, အေ၊ & Cohen, MS (၂၀၁၄) ။ hypersexual လူနာများအကြားသတိ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ dysregulation, Impulse နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု proneness ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 70, 313-321 ။ Doi: 10.1002 / jclp.22027
Reid, RC, & လက်သမား, BN (2009) ။ MMPI-2 ကို အသုံးပြု၍ hypersexual လူနာများအတွက်စိတ်ပညာစိတ်ပညာ၏ဆက်ဆံရေးကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 35, 294-310 ။ Doi: 10.1080 / 00926230902851298
ရိဒ်, RC, လက်သမား, BN, Hook, ဖြစ်မှု, Garo, အက်စ်, Manning, JC, Gilliland, R. ... Fong သည်, တီ (2012) ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 9, 2868-2877 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x
Reid, RC, Li, DS, Gilliland, R. , Stein, JA, & Fong, T. (2011) စိတ်ခံစားမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအမျိုးသားနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုစာရင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 37, 359-385 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2011.607047
ရော်ဂျာ, WM, & Schmitt, N. (2004) ။ multidimensional ဖွဲ့စည်းမှုသုံးပြီး Parameter ကိုပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်မထိုက်မတန်: လေးပင်ကိုယ်မူလကှကျ algorithms တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်။ Multivariate အပြုအမူသုတေသန, 39, 379- 412 ။ Doi: 10.1207 / S15327906MBR3903_1
Schermelleh-Engel, K. , Moosbrugger, H. , & Muller, H. (2003) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များ၏မထိုက်မတန်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်း: အရေးပါမှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဖော်ပြရန်ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်သုတေသနအွန်လိုင်း၏နည်းလမ်းများ, 8, 23-74 ။
Scherrer, JF, Xian, H. , Slutske, WS, Eisen, SA, & Potenza, MN (2015) ။ အထီးကျန် - compulsive အတန်းနှင့်အမျိုးသားအမွှာအမျိုးသားရေးဆောင်များတွင်အတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအကြားဆက်နွယ်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု, 72, 342-349 ။ Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.2497
Stein, DJ သမား, Kogan, CS, Atmaca, အမ်, Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Grant က, je ... ဗန် Den Heuvel, oa (2016) ။ အဆိုပါ ICD-11 အတွက် compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါများ၏ခွဲခြား။ အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorders ၏ဂျာနယ်, 190, 663-674 ။ Doi: 10.1016 / j.jad.2015.10.061
Szádóczky, အီး, Unoka, Z. , & Rózsa, အက်စ် (2004) ။ DSM-IV ဝင်ရိုး II ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန် (SCID-II ကို) အတွက်စနစ်တကျလက်တွေ့အင်တာဗျူး, ဟနျဂရေီဗားရှင်းအသုံးပြုသူရဲ့လမ်းညွှန်။ ဘူဒါပက်, ဟန်ဂေရီ: OS ကိုဟန်ဂေရီ Kft ။
Szalavitz, အမ် (2016) ။ အပြတ်အတောက်ဦးနှောက်: နားလည်မှုစွဲ၏တစ်ဦးကတော်လှန်ရေးသမားနည်းလမ်းသစ်။ နယူးယောက်, NY: စိန့်မာတင်ရဲ့နှိပ်ပါ။
Tabachnick, BG, & Fidell, LS (2001) multivariate စာရင်းဇယားအသုံးပြုခြင်း (4th ed ။ ) ။ ဘော်စတွန်, MA: Allyn နှင့် Bacon ။
Tolin, DF, Abramowitz, JS, Przeworski, A. , & Foa, EB (2002) ။ obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်အတွေးဖိနှိပ်မှု။ အပြုအမူသုတေသနနှင့်ကုထုံး, 40, 1255–1274. doi:10.1016/S0005-7967(01)00095-X
Tóth-Király, ဗြဲ, Morin, AJ, Bőthe, B. , Orosz, G. အ, & Rigó, အေ (2018) ။ လိုအပ်ချက်ပြည့်စုံမှု၏ multidimensionality စုံစမ်းစစ်ဆေး: ကိုယ်စားပြုမှုမော်ဒယ်တစ် ဦး က bifactor ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေး။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်လင်း: တစ်ဦးက Multidisciplinary ဂျာနယ်, 25, 267-286 ။ Doi: 10.1080 / 10705511.2017.1374867
Træen, ခ, Nilsen, TSR, & Stigum, အိပ်ချ် (2006) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရိုးရာမီဒီယာနှင့်နော်ဝေတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်း။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 43, 245-254 ။
Twohig, အမတ်, Crosby, JM, & ကော့, JM (2009) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ခြင်း - မည်သူသည်ပြForနာဖြစ်သနည်း၊ မည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်နည်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း, 16, 253-266 ။ Doi: 10.1080 / 10720160903300788
Waldeck, TL, & Miller က LS (1997) ။ တရား ၀ င်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုတွင်ကျား၊ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု၏ဂျာနယ်, 9, 269–275. doi:10.1016/S0899-3289(97)90021-3
ဝေါ်လ်တန်, MT, Cantor, JM, & Lykins, အေဒီ (2017) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexual အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ရို variable တွေကိုတစ်ခုအွန်လိုင်းအကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 46, 721–733. doi:10.1007/s10508-015-0606-1
Wéry, အေ, & Billieux, ဂျေ (2017) ။ ပြmနာဆိုက်ဘာဆက်စ် - စိတ်ကူး၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ, 64, 238-246 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2015.11.007
Wetterneck, မှန် CT, Burgess, AJ, က Short, MB, Smith က AH, & Cervantes, ME (2012) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်း, 62, 3-18 ။
Whiteside, SP, & Lynam, DR (2001) ။ အဆိုပါအချက်ငါးခုမော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse နားလည်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ, 30, 669–689. doi:10.1016/S0191-8869(00)00064-7
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ။ (2017) ။ ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၏နိုင်ငံတကာစာရင်းအင်းခွဲခြား။ (11th ed ။ beta ကိုဗားရှင်း) ။ ရယူရန်ဒီဇင်ဘာလ 8, 2017 မှ https://icd.who.int/dev11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1630268048
Zsila, Á။ , Bőthe, ခ, Demetrovics, Z. , Billieux, ဂျေ, & Orosz, G. အ (2017) ။ နောက်ထပ် SUPPS-P ထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံ - ကြီးမားသောဟန်ဂေရီနမူနာမှသက်သေသာဓက။ လက်ရှိစိတ်ပညာ, 1–11. doi:10.1007/s12144-017-9773-7
Zsila, Á။ , Orosz, G. အ, Bőthe, ခ, Tóth-Király, ဗြဲ, Király, O. , Griffiths က, အမ်, & Demetrovics, Z. (2017) ။ တိုးမြှင့်အဖြစ်မှန်ဂိမ်းများကိုအခြေခံသည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့လေ့လာမှု - ပိုကီမွန်၏ဖြစ်ရပ်သည်ပိုကုန်းမွန်ဖျားနာစဉ်နှင့်ပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ Doi: 10.1016 / j.paid.2017.06.024